အဟောင်းထဲက အစုပ်တွေ – ၉ – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
အဟောင်းထဲက အစုပ်တွေ – ၉
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၈ ရက် (ဇင်းမယ်)
ကျွန်တော်က ငယ်ပေါင်းဆိုတော့ အကြောင်း သိတယ်။ စကားပြောရင်တောင် သူက နိုင်ချင်တယ်။ သူကသာ ချယ်လှယ်ထားချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် သူ့ကို ဘယ်တော့မှ စကားနိုင်မလုခဲ့ဘူး။ တစ်သက်လုံး အလျှော့ပေးပြီး ပေါင်းခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ လူတွေကိုလည်း သူက ချယ်လှယ်တတ်ပြန်တယ်။ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်သူနဲ့က ပေါင်းလို့ ရမယ်၊ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်သူကဖြင့် အစပ်တည့်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး သူက ကြားချောင်က ၀င် ဆုံးဖြတ်တယ်။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပေါင်းလို့အဆင်ပြေမယ့်သူလို့ သူယူဆသူကိုဆို သူကပဲ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ အဆင် မပြေမယ့်သူတွေလို့ ယူဆရင် အဲဒီ့နှစ်ယောက် မဆုံဖြစ်အောင်တောင် သူက စီမံတယ်။ အဲလိုပါ။
ကျွန်တော့်ကို ချယ်လှယ်တာများဆို ရည်းစားကိစ္စအထိ ပါတယ်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက် တကယ်စတွဲဖူးတဲ့ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တုန်းက ကျွန်တော့်ရည်းစားဟာ တကယ်တော့ သူကုလားဖန်ထိုးလိုက်တာပါ။ သူနဲ့ ဆွေရိပ်မျိုးရိပ်မကင်းတဲ့ အတန်းဖော် မိန်းကလေးကို သူက ကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ စာရေး၊ သူကပဲ စာပေးခဲ့ရာက ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အဆင်ပြေသွားခဲ့တာပေါ့။ (အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ချစ်သူ့ရင်ခွင် ရှာပုံတော်ကိုသာ ပြန်လည်ကိုးကားတော်မူကြပါတော့ဗျာ။)
ကျောင်းပြီးမှလည်း ကျွန်တော့် ရည်းစားကိစ္စကို ချယ်လှယ်လိုက်ပြန်ပါသေးတယ်။ အဲဒီ့အချိန်က ကျွန်တော် ဘွဲ့လွန် သင်တန်းတစ်ခု တက်နေချိန်ပါ။ ကျွန်တော့်မှာ ရည်းစား ရှိပါတယ်။ (ဒါလည် အသုဘမှာ တွေ့တဲ့ အချစ် ခေါင်းစဉ်နဲ့ ချစ်သူ့ရင်ခွင် ရှာပုံတော်မှာ ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။) အဲဒီ့ ရည်းစားကို မေမေက တစ်စက်မှ သဘောမကျပါဘူး။ သားသမီးကို ဆင်စီး မြင်းရံစေချင်တဲ့ မိဘစေတနာလို့ပဲ လွယ်လွယ် ဆိုကြပါစို့ရဲ့ဗျာ။
ကျွန်တော့်ကို ပြောလို့ မရတော့ ကျွန်တော်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မြင်သမျှလူကို မေမေက နတ်သံနှောတော့တာပေါ့။ မြင်သမျှလူဆိုတာ တကယ့်ကို တွေ့သမျှလူကို ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်နဲ့ နည်းနည်းလေးပဲ သိတဲ့သူ ဖြစ်ဦး၊ ကျွန်တော် သူ့စကား နားမထောင်တဲ့ အကြောင်း၊ ဘယ်လိုမှ သုံးမရတဲ့ မိန်းမနဲ့ တွဲနေကြောင်း ဟုတ်တာ နည်းနည်း၊ မဟုတ်တာ ခပ်များများလေးနဲ့ပေါ့။ လူတစ်ယောက်ကို တစ်ကြိမ်တွေ့လို့ တစ်ခါ ပြောပြီးရုံနဲ့လည်း မပြီးဘူး။ ဆယ်ခါ ဆုံရင် ဆယ်ကြိမ် ထပ်ပြောတာမျိုး။
အဲတော့ သည်ဒဏ်ကို အခံရဆုံးက ကိုရွှေဘိုနီဖြစ်နေတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လို့ မေမေနဲ့ တိုးတဲ့အခါမှာလည်း မေမေက သူ့ကို သည်ကိစ္စပဲ အမြဲ ပြောတတ်ပါတယ်။ အဲတော့ အဲဒီ့ကောင် အခံရဆုံးပေါ့။
သည်မှာတင် သူက ကုလားဖန်ထိုးပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တက်နေတဲ့ ဘွဲ့လွန် သင်တန်းမှာ အချိန်ပိုင်း ဆရာမ ၀င်လုပ်နေသူတစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော့်ကို သူက အောင်သွယ်လိုက်ပြန်တာပါ။
အချိန်က အချိန်ကောင်း ဖြစ်သွားတယ်။ မေမေ့ရဲ့ တိုက်စစ်တွေကြောင့် ကျွန်တော် အတော် စိတ်ညစ်နေချိန်။ မူလကတည်းက မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘယ်သူ့ကိုမဆို အလွယ်တကူ စိတ်ပါတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ဉာဉ်လေးကိုလည်း သူက သိထားတာ ဖြစ်နေတော့ နှစ်ခါတောင် သူ မကြိုးစားလိုက်ရပါဘူး။ ဟိုကလည်း ဆက်ရက် တောင်ပံကျိုးဖြစ်နေတော့ အဲဒီ့မှာတင် လက်ရှိတွဲနေတဲ့ ရည်းစားကို ဖြတ်ပြီး သူအောင်သွယ်တဲ့ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ တွဲဖြစ်သွားပါရောလား။ (ဒါလည်း အသေးစိတ်ကို ချစ်သူ့ရင်ခွင် ရှာပုံတော်မှာသာ ဖတ်ရှုတော်မူကြပါတော့။)
မေမေတော့ အချီကြီး ထိတဲ့ ပွဲပါပဲ။ (ဒါကတော့ ချစ်သူ့ရင်ခွင်ရှာပုံတော်မှာ မပါခဲ့တဲ့ အကြောင်းပါ။) ကိုရွှေဘိုနီ မေမေ့ကို ပညာပေးလိုက်တဲ့ ပွဲလို့တောင် ဆိုရမလား မသိဘူး။
ဖြစ်ပုံက သည်လို။ ကျွန်တော်တွဲနေတဲ့ တစ်ယောက်ကို မေမေ သဘောမကျတာက ဆင်းရဲလို့ရယ်၊ ဆယ်တန်း မအောင်၊ ဘွဲ့မရလို့ရယ်ပါ။
သည်နေရာမှာ ဘိုနီ တစ်ယောက် ဆယ်တန်းအောင်လျက်ကနဲ့၊ သူ့တစ်ဘ၀လုံး ကျွန်တော့်ကို အကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ့သလို အောင်တော့လည်း အမှတ်ပေါင်းမှာ ကျွန်တော့်ထက် လေးမှတ် အသာနဲ့ အောင်ခဲ့ပါလျက်ကနဲ့ ဘွဲ့မရခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ထည့်ပြောဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အရာရာမှ အရှုံးမပေးချင်သူကြီး ကိုရွှေဘိုနီ့အတွက် အဲဒီ့အချက်က သူ့ရင်ထဲမှာ တငွေ့ငွေ့နဲ့ မခံချိ မခံသာ ဖြစ်ချင်စရာ ကောင်းနေခဲ့ပုံပါပဲ။
အမှန်တော့ သူက နဂိုကတည်းက ကျောင်းစာကို စိတ်ပါလှသူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်တာ အမှန်ပဲ။ ကျွန်တော့်လိုပဲ ၀တ္တရားရှိလို့ ကျောင်းနေခဲ့တဲ့ သဘောမျိုးလောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ပထမနှစ် တက်နေခိုက်မှာ သူက မူးယစ်ဆေး သုံးပါတယ်။ သုံးတာမှ အကြောထဲကို ဆေးထိုးပြီး သုံးတဲ့အဆင့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ခေတ်က မူးယစ်ဆေးကို ရန်ကုန်မြို့လယ်က လေဟာပြင်ဈေးမှာတင် အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့ ရတဲ့ခေတ်ခင်ဗျ။ မူးယစ်ဆေးဆိုရင် ဘိန်းနဲ့ ဘိန်းဖြူလောက်သာ အဓိက ထားတဲ့ခေတ်ပါ။ မြန်မာ့ ဆေးဝါး လုပ်ငန်းလို့ ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံပိုင် ဆေးဝါး လုပ်ငန်းက ထုတ်တဲ့ ခိုမက်သာဇင် ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးနဲ့ ပက်သဒီး(န်) ထိုးဆေးတို့ကိုတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး စာရင်းထဲ မသွင်းသေးတဲ့အပြင် အစိုးရ ဆေးဆိုင်တွေကတစ်ဆင့် ၀ယ်လို့ ရနိုင်ပါသေးတယ်။
အစိုးရဆေးဆိုင်တွေက ၀ယ်လို့ရတယ်လို့ ဆိုတဲ့အတွက် လူတိုင်း အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့ ရတယ်လို့တော့ မအောက်မေ့ပါနဲ့။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကြီး ဖြစ်တာမို့ ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေးတောင်မှ ခွဲတမ်းနဲ့ ရောင်းတာပါ။ ပက်သဒီး(န်)လိုဟာမျိုးကျတော့ ထောက်ခံစာတွေ၊ ဘာတွေ၊ ညာတွေ လိုခဲ့မှာပေါ့ဗျာ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပိုင်ရာ ပိုင်ကြောင်းနဲ့တော့ ၀ယ်မယ်ဆို ၀ယ်လို့ရတဲ့ သဘောတော့ ရှိသဗျ။
အစိုးရဆိုင်မှာသာ လူတိုင်း အလွယ်တကူ လိုသလောက် ၀ယ်မရ ရှိရမယ်၊ မှောင်ခိုဈေးလို့ ခေါ်တဲ့ လေဟာပြင်မှာတော့ ၀ယ်လို့ လွယ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ ပက်သဒီး(န်)ကို ကိုရွှေဘိုနီတို့ အုပ်စုက သုံးစွဲကြတာပါ။
ကံကောင်းချင်တော့ ကျွန်တော်က ပထမနှစ်မှာ စာအုပ်ကြီးသမား၊ ဆရာဝင်းဦး စကားနဲ့ ပြောရင် “စာတစ်အုပ်တည်းသမား”လုပ်လို့ ကောင်းနေချိန်ပေါ့။ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ၊ စံတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်ချင်တဲ့ ဉာဉ်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု ကံကောင်းတာက သူတို့ မူးယစ်ဆေး စသုံးချိန်မှာ ကျွန်တော်က “ဘ၀သမား”လည်း ဖြစ်နေပြန်တော့တာပါပဲ။ အဖေ မရှိတော့တဲ့အတွက် ပထမနှစ် ကျောင်းသားဘ၀မှာတင် အရှင်လတ်လတ် လမ်းပေါ် ရောက်သွားပြီး အငှားယာဉ်မောင်းကာ ကျွန်တော်တို့သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် နေ့စဉ် ၀င်ငွေ ရှာနေသူ ဖြစ်နေပါပြီ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် “ဧရာမ တာဝန်ရှိသူကြီး”လို့ ထင်မှတ်မှားနေတဲ့ အချိန်ပါ။
နောက်ထပ် ကံကောင်းတာက အကွက်သိပ်မြင်တဲ့ ကိုရွှေဘိုနီဟာ ဒါမျိုးကို ကျွန်တော် ခါးသီးမယ်ဆိုတာ မြင်ထားပြီးသားမို့ ကျွန်တော့်ကို အဖော်မစပ်တဲ့အပြင် ကျွန်တော့်ရှေ့မှာလည်း တစ်ခါဆို တစ်ခါဖူးမှ မူးယစ်ဆေး မသုံးခဲ့ဖူးပါဘူး။
သူကတော့ တအားကို သုံးနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ရဲ့ ဘ၀တစ်သက်တာ ခင်မင်ခဲ့ကြတဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ထိုးမလို ကြိတ်မလိုအထိ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ဖြစ်ဖူးခဲ့ပါတယ်။ ချယ်လှယ်ထိန်းချုပ်ချင်သူကြီးကို မူးယစ်ဆေး မလုပ်ဖို့ တားရာမှာ ကျွန်တော့်ဘက်က ပညာသား မပါဘဲ တုတ်ထိုး အိုးပေါက် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက် တားမြစ်ဖို့ အားထုတ်ခဲ့မိတဲ့အတွက် မောင်မင်းကြီးသား ဒေါသူပုန်ထပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ထိုးမလို ကြိတ်မလို ဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်ကလည်း စေတနာနဲ့ ပြောတာကို ဖြစ်ရကောင်းလားဆိုပြီး ဒေါပွသွားပါတယ်။ ဒါနဲ့တင် ဖြစ်ကုန်ကြပါရောလား။ အနားမှာ ရှိတဲ့ အတန်းဖော်တွေ ၀ိုင်းဆွဲထားကြလို့သာ တကယ် ထိုးတဲ့အဆင့်အထိ ရောက်မကုန်တာပါ။
သူ မူးယစ်ဆေး သုံးနေချိန်မှာ ကျွန်တော် သူ့ကို ခပ်ရှောင်ရှောင် နေလိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ပထမနှစ် စာမေးပွဲ ဖြေချိန်မှာ မောင်မင်းကြီးသားက မူးမူးရူးရူးနဲ့ စာမေးပွဲ လာဖြေပါတယ်။ အခုခေတ်စကားနဲ့ ပြောရင်တော့ “စွတ်ကောင်းနေပြီး” လာဖြေတာပါ။ လက်တွေ့ ဖြေရတဲ့ နေ့ပါ။
အကောင်းလွန်နေတော့ သူ့ကိုယ်သူ ဘာလုပ်လို့ လုပ်မိမှန်း မသိတာပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် အရာရာကို စီမံ အကွက်ချ လုပ်ကိုင်တတ်သူကြီး သတိလစ်သွားတာပဲလားတော့ မသိဘူး။ ခိုးချဖို့ ယူလာတဲ့ တစ်နှစ်စာ လက်တွေ့ သင်ရိုးတစ်ထပ်ကို သူ့ဆီက စာမေးပွဲခန်း စောင့်သူက မိသွားပါတော့တယ်။ သာမန်အားဖြင့် ဘိုနီက ရည်မွန်ပါတယ်။ ချေငံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးရှိန်က ဘယ်လောက်များနေလုိ့ ဘယ်လို လွဲကုန်သလဲတော့ မသိဘူး၊ စာမေးပွဲခန်းစောင့်တဲ့ ဆရာ/ဆရာမနဲ့ ပြေလည်အောင် ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရင် ပြီးနိုင်လျက်ကနဲ့ စာမေးပွဲခန်းထဲက အထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အပြင် ကျောင်းတက်ခွင့်လည်း နှစ်အကန့်အသတ်နဲ့ (သုံးနှစ်လား မသိ) အပိတ်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။
သူနဲ့ တစ်တန်းတည်းမို့ သူ အထုတ်ခံရချိန်မှာ ကျွန်တော် သူ့ကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်က သူ့မျက်နှာက ထီမထင်တဲ့ မျက်နှာပါ။ အခုတောင် ပြန်မြင်ယောင်မိသေးတယ်။ “ကောင်း”နေ၊ အကြီးအကျယ် “ကွဲ”နေတာလည်း သေချာတဲ့ မျက်နှာပါ။ “စာတစ်အုပ်တည်းသမား”ကျွန်တော်က စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့သာ အသာကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။
အဟဲ… သူ သိပ်အောင်မြင်ထင်ရှားလာတဲ့အခါ သူ့အကြောင်းကို မေးမြန်းပြီး စာအုပ် ထုတ်ရာမှာတော့ ဒါတွေ ပါမလာပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သူ့မျိုးရိုးစဉ်ဆက် တအားချမ်းသာခဲ့တဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ထိန်ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီ့စာကို ဖတ်မိပြီး သူ့ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တဲ့ စာရေးသူကို ပြောတော့ အဲဒီ့ စာရေးသူက ညည်းပါတယ်။
“အောင်မလေးဗျာ… သည်စာအုပ်လေးထဲပါတဲ့ သူ့အကြောင်း စာမျက်နှာလေး ၂၀ လောက်တောင် အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ပြင်ပေးထားရတာဗျ။ သူ့အတွင်းရေးမှူးဆိုတဲ့ သူတွေနဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သွားတွေ့ရ၊ ဟိုနား ပြင်ပေးပါဦးဆို ပြင်ရ၊ သည်နား ပြင်ပေးပါဦးဆို ပြင်ရနဲ့… ခင်ဗျားပြောသလို စေ့စေ့ပေါက်ပေါက် မေးဖို့တော့ စိတ်တောင် မကူးရဲဘူးဗျာရေ့”တဲ့။
ဟုတ်လောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူနဲ့ ပတ်သက်လို့ အတိုတစ်ပုဒ်ရေးတော့တောင် သူတို့ကို “သူကြွယ်”လို့ ရေးလိုက်တဲ့အတွက် လင်ရော မယားကပါ ကန့်ကွက်ကြတာ ခံရဖူးပါသေးတယ်။ သူဌေးလောက်ရေးရင် တော်ရောပေါ့ဆိုပဲ။ 😀
သူ့အောင်မြင်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း စာအုပ်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် သူ့ကို ပြောခဲ့သေးတယ်။ သူ မူးယစ်ဆေးစွဲခဲ့တာ၊ မူးယစ်ဆေးကြောင့် တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်နဲ့ ကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရပေမယ့် ဘ၀ပျက်မသွားဘဲ မယိမ်းမယိုင် ထူထောင် အောင်မြင်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ လူငယ်တွေအတွက် အင်မတန် အဖိုးတန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဖြစ်တာမို့ ထိန်ချန်ဖို့ မသင့်ဘူးလို့။ သူက ရယ်ပဲ နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း “အေး… မင်း ထုတ်မပြောခဲ့ပေမယ့် ငါ မင်းအကြောင်း ရေးတဲ့အခါကျရင်တော့ အဲဒါတွေ ထည့်ရေးမှာနော”လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အကြောင်းကို ကျွန်တော့်ထက်တောင် ပိုသိတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကလည်း ပြန်ပြောပါတယ်။
“ရေးပေါ့ကွာ။ ငါ တားလည်း မင်းက ရေးမယ့်ကောင်ဆိုတော့ မတားပါဘူး။ မင်းရေးချင်သလို ရေးပေါ့”တဲ့။
အခု ကျွန်တော် ရေးတာဖတ်ပြီး သူ့ဘက်က ကျလိကျလိ ဖြစ်နေသူတွေများ ရှိနေမယ်ဆိုပါရင် သူ့ပါမစ်နဲ့ ကျွန်တော်ရေးတာမှန်း သိကြစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ 😀
ကျောင်းထုတ်ခံရပြီးတဲ့နောက် ကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့ သက်တမ်းစေ့တော့ သူ စာပေးစာယူ တက်ဖို့ လျှောက်လွှာတွေ ဘာတွေ တင်၊ ကျောင်းဝင်ခွင့်တွေ ဘာတွေ ရလိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့အချိန်မှာ သူက ဘ၀အတွက် စတင် ရုန်းကန် အားထုတ်နေပြီမို့ တစ်ကြောင်း၊ အလေလိုက်လို့ ကောင်းနေတာမို့ တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် ကျောင်းဝင်ခွင့်ရတဲ့ အဆင့်မှာပဲ ရပ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ပြိုင်ချင်ဆိုင်ချင် နိုင်ချင်စိတ် ကြီးမားလှသူ သူ့အတွက်က လူတကာ ဘွဲ့ရနေတဲ့ ခေတ်မှာ သူ ဘွဲ့မရနိုင်ခဲ့တာ အတွက် သူ့အသည်းထောင့် တစ်နေရာမှာ ဆူးစူးနေခဲ့မှာလည်း သေချာပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက သူ့ဇနီးက မဟာဘွဲ့အထိ တက်ယူလိုက်ပြန်တာပါပဲ။ သူ့ဇနီးကလည်း အသွင်တူလို့ အိမ်သူ ဖြစ်လာသူပီပီ အနိုင်ယူတတ်ပါတယ်။ တခြား ဘာနဲ့မှ မနိုင်ရတောင် စကားနဲ့တော့ သူ့ကို အနိုင်ယူလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲတော့ သင်း ရင်ထဲမှာ အဲဒီ့ ဘွဲ့ကိစ္စက အစိုင်အခဲ တစ်ခု ဖြစ်နေလောက်တယ်။
သည်အချိန်မှာ ကျွန်တော့်အမေက ဆယ်တန်းမအောင်၊ ဘွဲ့မရတဲ့ ပြစ်မှုနဲ့ ကျွန်တော် တွဲနေသူကို “အသေဖဲ့”တာတွေ နားမဆံ့အောင် ကြားနေရတဲ့အခါ ကိုရွှေဘိုနီရဲ့ အနာကို ဆွသလို ဖြစ်မှာလည်း အသေအချာပါ။ သည်မှာတင် သူက ကျွန်တော့် အချစ်ရေးကို ကုလားဖန် ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းမှာ အချိန်ပိုင်း ဆရာမ လုပ်နေသူဆိုကတည်းက အဲဒီ့ အမျိုးသမီးက နှစ်ဘွဲ့ရပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီ့အမျိုးသမီးရဲ့ ဖခင်ကလည်း မဆလ aခတ်ဦးတုန်းက ရာထူးတာဝန်အကြီးကြီး ရယူခဲ့ဖူးသူပါ။ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်မှာ အိမ်ကြီးရခိုင်နဲ့ နေတဲ့သူပေါ့။
အဟဲ… အမေ ပက်လက်လန်တာက အဲဒီ့အမျိုးသမီးက တစ်စက်ကလေးမှ မလှရှာတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူလိုချင်တဲ့ အောက်ပါ အရည်အချင်းအပြည့်နဲ့ဆိုတော့ အမေ့ခမျာ မပြောသာတော့ပါဘူး။ မပြောသာတဲ့ ကြားက ပြောဖြစ်အောင်တော့ ပြောပါသေးတယ်။ “ခမျာ တော်တော် မလှရှာဘူးပဲကိုးကွယ်”တဲ့။ 🙂
တကယ်တော့ အဲဒီ့အမျိုးသမီးရဲ့ လှတဲ့အပိုင်းလေးတွေက အမေ အလွယ်တကူ မြင်နိုင်တဲ့ နေရာမှာမှ ရှိမနေတာကိုးလေ။ 😀
မြင်ယောင်နေဆဲ ငှဲ ငှဲ
ညစ်ပတ်တာတွေ လျှောက်မစဉ်းစားကြနဲ့ဗျာ။ အဲ… ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ညစ်ပတ်မလား မသိဘူး။
အဲဒီ့အမျိုးသမီး တစ်ကိုယ်လုံးမှာ အလှဆုံးက ချိုချိုပါ။ တကယ်ပါဗျာ၊ ခုပြော ခုပြန်မြင်သေးတယ်။ ကျွန်တော့်တစ်သက်မှာ ချိုချိုပေါင်းများစွာကို အပြင်မှာ အရင်းအတိုင်း မြင်ဖူးပါတယ်။ (ကြွားတယ်လို့ ထင်ချင်လည်း ထင်ပါ။ မတတ်နိုင်ဘူး။)
သို့သော် အဲဒီ့အမျိုးသမီးလောက် လှတာတော့ သည်တစ်သက်မှာ သည်တစ်ခါပဲ တွေ့ဖူးပါသဗျာ။ အဲဒါကို ပြောလိုက်တာပါ။ အခုဆိုရင်တော့ သူလည်း ၆၀ လောက် ရှိနေပြီမို့ အရင်လို ဘယ်လှပါတော့မလဲနော်။ အဲ့တုန်းက ဒစ်ဂျစ်ထယ်(လ်) ခယ်မရာတွေ မပေါ်သေးတာ နာသဗျာ။ မဟုတ်ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားလိုက်ခဲ့မိမှာ အသေအချာပဲဗျ။ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတွေလည်း ကျွန်တော်ပြောတာ လွန်မလွန် အကဲဖြတ်နိုင်မှာပေါ့။ ခုတော့… ခုတော့… 😛
အဲဒါက နောက် သူနဲ့ အဆင်ပြေသွားမှ မြင်ရတဲ့ အလှပေါ့ဗျာ။ မျက်မြင်မှာ ဘယ်လိုမှ မလှတာကို ကျွန်တော်က ဘာ့ကြောင့်ကြိုက်သလဲလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။
ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အမေ့ရဲ့ နေ့စဉ် တိုက်ကွက်ကြားမှာ အလူးအလိမ့်ခံနေရတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ယိမ်းယိုင်နေတာလည်း ပါတယ်။ ကိုယ့်ဆရာမ ကိုယ် ပြန် ရည်စားထားရမှာမို့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းနေတာလည်း ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အောက်ပါအရည်အချင်းတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်ပြီး မေမေ့ကို ရွဲ့ချင်တဲ့စိတ်လည်း ပါတယ်။
ချဉ်းကပ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုရွှေဘိုနီ အောင်သွယ်ထားတဲ့အတွက် ဘာမှ အခက်အခဲ မရှိတော့ဘဲ ရက်ပိုင်းလေးနဲ့တင် အဆင်ပြေသွားပါတော့တယ်။
ကိုရွှေဘိုနီတစ်ယောက် လူရိပ်လူကဲကို ကောင်းကောင်း နားလည်ပြီး လိုသလို ချယ်လှယ်သွားတတ်ပုံလေးတွေရဲ့ အကောင်းဆုံး နမူနာ ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
သည်လိုပြောတဲ့အခါ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ သူ လုံးလုံး ကြည့်လို့မရသူ တစ်ယောက်လည်း ပါပြန်သေးတယ်။ အဲဒီ့လူနဲ့ ကျွန်တော် ခင်မင် ရင်းနှီး ပေါင်းသင်းနေတာကိုလည်း သူတစ်စက်မှ မကြိုက်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကို နှုတ်ကကို ဖွင့်ပြောပါတယ်။ “ငါ အဲဒီ့လူကို မကြိုက်ဘူး”တဲ့။
အသားလွတ်ကြီး မကြိုက်တာလို့ပဲ ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။
သူမကြိုက်သူကိုတော့ နာမည်မှန်နဲ့ ထုတ်ရေးပါ့မယ်။ သူလည်း ကျွန်တော့် ကျေးဇူးရှင်ထဲမှာ ပါပါတယ်။
သူငယ်ချင်းလို့သာ ပြောရတယ်၊ တကယ်က သူက ကျွန်တော့်ထက် အသက် ငါးနှစ်မက ကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀မှာ သူက တက္ကသိုလ် တတိယနှစ်လားတောင် ရောက်နေပါပြီ။
ကျွန်တော်က ဆရာဦးထွန်းဦးကျော်နဲ့ တအားရင်းနှီးပါတယ်။ ဆရာဦးထွန်းဦးကျော်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော နှမက ဘူမိဗေဒ တက်နေချိန်မှာ ကျွန်တော့် ကဗျာတွေ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို အဲဒီ့အစ်မကြီးကို ပေးထားပါတယ်။ ကိုယ့်ကဗျာ ဖတ်မယ့်သူ မရှိတော့ ဖတ်မယ့်သူကို ပေးလိုက်တာပါ။ အဲဒီ့ ကဗျာစာအုပ်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘူမိဗေဒ ဌာနမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ အစ်မကြီးရဲ့ အတန်းဖော် ကဗျာဝါသနာရှင်တွေ့ လက်ထဲ ရောက်သွားရာကနေ အဲဒီ့ အစ်ကိုကြီးက ကျွန်တော့် ကဗျာတွေကို သူတို့ စုထုတ်တဲ့ “နေနန်းသိရ်လော ကန်မှာသော်ဝ်”ဆိုတဲ့ စာကူးစက်လက်လှည့်စာအုပ်ထဲမှာ ယူသုံးလိုက်ကြပါတော့တယ်။
လူကသာ ဆယ်တန်းရှိသေးတာ၊ ကျွန်တော့်ကဗျာတွေကတော့ တက္ကသိုလ်တောင် ရောက်သွားပါရောလား။
အဲဒီ့ ကဗျာစာအုပ်ကို စီစဉ်ထုတ်ဝေသူက ရာမ (ဘူမိဗေဒ)ဆိုတဲ့ အစ်ကိုကြီးပါ။ သူနဲ့ လူချင်း မဆုံဖူးပါဘူး။ ဆရာ့နှမကတစ်ဆင့် ကျွန်တော့်ကဗျာတွေ စာအုပ်ထဲ ထည့်ချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ထည့်ပေါ့။ ဘ၀င်တောင် လေဟပ်သွားသေးတယ်။ တယ်တော်တဲ့ ငါပါလားလို့တောင် သွေးနားထင် ရောက်သွားသေး။ ဟေး ဟေး…
အဲလိုနဲ့ ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ သူ့ကို သွားရှာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တက်ရတာက အခု ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်တထောင်နယ်မြေလို့ ခေါ်တဲ့ ကျောင်းမှာ။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၉ ရက် (ဇင်းမယ်)
ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်၊ စိတ်ဓာတ်အဆင့် မြင့်သူများနဲ့ နေရခြင်းသည်လည်း
ကျောင်းသားတွေကို ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဗိုလ်နေ၀င်းနဲ့ အပေါင်းပါများဟာ စစ်တပ်က လူတွေ ဖြစ်တာနဲ့ အညီ ကျောင်းသားတွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း မထားရေးဆိုတဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် စီမံကိန်းကို သဘာဝ သမိုင်းတက္ကသိုလ် (အခု ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လှိုင်နယ်မြေထင်တယ်)မှာ ပထမနှစ်တွေ ထားခြင်းနဲ့ စတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ နှစ်ကျတော့ ဒုတိယဆင့်အဖြစ် သမိုင်းမှာတင် မဟုတ်တော့ဘဲ ဗိုလ်တထောင်က လုပ်သားကောလိပ်နေရာကို တချို့တစ်ဝက် ခွဲပို့လိုက်ပါတော့တယ်။ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ သားမြေး အစဉ်အဆက်တွေ အဲဒီ့ ဗျူဟာကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်သွားပုံကတော့ ကနေ့ တစ်ပြည်လုံးမှာ တက္ကသိုလ်တွေ ဆယ်ဂဏန်းနဲ့ ပွထကုန်တော့သာ ကြည့်ပါတော့ဗျာ။
ကျွန်တော် ပထမနှစ် ရောက်စမှာ ပထမဆုံး လုပ်တဲ့အလုပ်က အဲဒီ့ ကိုရာမကို သွားရှာတာပါ။ သူတို့ ဘူမိဗေဒ ကျောင်းသားတွေက သမိုင်းကောလိပ်မှာ တက်ရတာမို့ သမိုင်းကျောင်းဝင်းထဲ ရောက်သွားပါတယ်။
မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ ဘူမိဗေဒဆောင်တွေရဲ့ လှေကားထောင့်ချိုးတစ်နေရာမှာ တိုက်ပုံအမည်းကို ကော်လာပါ အပြာနုရောင် အရိပ်ပန်းအင်္ကျီနဲ့ တွဲဖက် ၀တ်ဆင်ထားပြီး ကော်ကိုင်း မျက်မှန်၊ မှန်သား အပြာနုရောင်ကို တပ်ထားတဲ့ အသက်ခပ်ကြီးကြီး၊ အရပ်အမောင်း ကောင်းကောင်း၊ အသားညိုညို ကျောင်းသားကြီး တစ်ယောက်ဟာ ပြည်လှဖေရဲ့ နတ်ရှင်နောင် သီချင်းကို အကျဟဲနေပါတယ်။ သူ့ဘေးမှာတော့ ၀က်ခြံ ထူလဗျစ်နဲ့၊ သူနဲ့ မတိမ်းမယိမ်း ကျောင်းသား တစ်ယောက်လည်း ရှိနေပါတယ်။
ကျွန်တော် မေးစမ်းကြည့်တဲ့အခါ သီချင်းဆိုနေသူဟာ အဲဒီ့ ရာမ (ဘူမိဗေဒ) ကိုယ်တော်တိုင် ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ တကယ့်ကို အပ်ကျ မတ်ကျပါခင်ဗျ။
သူနဲ့ အဲဒီ့တစ်ခေါက်ပဲ ဆုံလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ဆုံပြီး များမကြာခင်မှာ သူက ထောင်ထဲကို ရောက်သွားလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပထမနှစ် တက်ခါစမှာပဲ မှိုင်းအရေးတော်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကျောင်းသားတွေကို ဖမ်းပါတယ်။ ထောင်ထဲပို့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ သားမြေးအစဉ်အဆက်များ နိုင်ငံရေးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံပါပဲ။ သိပ်ကို ယဉ်ကျေးတဲ့သူများ၊ စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်း မြင့်မားလှကြသူများပေကိုးခင်ဗျာ။
အဖုံးနဲ့ အတွင်းသား ၀ိရောဓိ
ကိုရာမ ထောင်ကထွက်လာတော့ ကျွန်တော်နဲ့ အတော်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော် ခင်ပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကို ညီငယ်တစ်ယောက်လို ဖေးမ ဆက်ဆံပါတယ်။ တကယ့် ပကတိ အစ်ကိုကြီးပါပဲ။ ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့အချက်က ကိုရာမဟာ အင်မတန် ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပါတယ်။ တိုက်ပုံဝတ်တာ အလွန်ဝါသနာပါ၊ မျက်မှန်ပြာကြီးကို တပ်ပြီး ဟိတ်ထုတ်ပေမယ့် သူ့အပြောအဆိုနဲ့ စိတ်ရင်းက ပွင့်လင်းရိုးသားလှပါတယ်။
အဲဒါကို ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘူး၊ ကိုရွှေဘိုနီက ကြည့်မရဘူးခင်ဗျ။ သူနဲ့ စကားလည်း ငါးခွန်း ပြည့်အောင် မပြောဖူးခဲ့၊ ရင်းနှီးစွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့ဆိုတာ ဝေလာဝေးပါ။
ကိုရာမကတော့ ဘိုနီနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူသေသွားတဲ့အထိ ဘာဆို ဘာမှ မပြောဖူးခဲ့ပါဘူး။ ဘိုနီကတော့ ကျွန်တော် ကိုရာမနဲ့ ပေါင်းတာကို မကြိုက်တဲ့အကြောင်း ကျွန်တော့်ကိုသာမက အမေ့ကိုပါ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခက်တာက အမေကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုရာမကို ခင်တာပါပဲ။ အေးရောပေါ့…
ပြောချင်တာက ဘိုနီ့မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ စိတ် မရှိဘူးလို့ ယူဆစရာ အချက်ကလေး တစ်ချက်ပါ။ လူတစ်ယောက်ကို အခြောက်တိုက် မြင်မြင်ချင်း ကြည့်မရဘူးဆိုတာတော့ လူတိုင်း ဖြစ်ဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာကျတော့ ထူးဆန်းတာက တချို့ ကျွန်တော် မြင်မြင်ချင်း ကြည့်မရခဲ့သူတွေဟာ တကယ်ပေါင်းကြည့်တော့မှ အင်မတန် နှစ်လို ခင်မင်စရာ ကောင်းနေတတ်သလို အမြင်မှာ သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့သူတွေဟာ တကယ်ပေါင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှ ကိုယ်နဲ့ အစပ်မတည့်သူတွေ ဖြစ်နေတတ်တာပါပဲ။
သိုးဆောင်းစကားမှာတော့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အဖုံးကြည့်ရုံနဲ့တင် ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူးလို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အပွေးမြင် အပင်သိဆိုတဲ့ မြန်မာစကားလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက လူတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် အခါခပ်သိမ်း မမှန်နိုင်ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။
ကျွန်တော်ကသာ မမှန်နိုင်ဘူး ထင်နေတာ၊ ကျွန်တော့် ချစ်သူငယ်ချင်းကတော့ သူ့ကိုယ်သူ အပိုင်တွက်ထားပါတယ်။ သူ မြင်တာ မှန်ရမယ်ပေါ့။
သူ့လိုသာ ပြောကြကြေးဆိုရင် ကျွန်တော် မြင်မြင်ချင်း ကြည့်မရတဲ့သူက သူ့ဇနီးပါ။ ဘယ်လိုမှကို မျက်စိထဲ အချိုးမပြေပါဘူး။ သူ့ဇနီးက သူနဲ့ ပထမနှစ်ကျောင်းသားဘ၀ (သူ ကျောင်းထုတ်မခံရခင်) ကတည်းက တွဲခဲ့တဲ့သူပါ။ သူ့ဇနီး ကျောင်းတက်နေတဲ့ လေးနှစ်တာလုံးလုံးမှာလည်း သူက လာလာနေတာမို့ အမြဲ တွေ့နေပါတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီ့ လေးနှစ်လုံးလုံး အဲဒီ့မိန်းမကို နည်းနည်းမှ ကြည့်မရခဲ့ပါဘူး။
အဲ… သူနဲ့ ညားတော့ အဲဒီ့မိန်းမလည်း ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဖြစ်လာပါရောလားဗျာ။ အဲတော့ကျတော့မှ အဲဒီ့မိန်းမဟာ အလွန်ရိုးမှန်း အမှန်း သိသွားပြီး အရမ်းခင်ဖို့ကောင်းမှန်း သိသွားပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်မတုံး။
လူဆိုတာတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်မှန်တယ်၊ သူမှားတယ်လို့ ဆိုလိုက်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ လူ့စရိုက်သဘာဝကို ပုံဖော်ဖွဲ့ဆိုတာ သက်သက်ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ဘိုနီဆိုတဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းရဲ့ ပင်ကိုသဘာဝကို ထင်ရှားအောင် ဖွင့်ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူက သူ့ကိုယ်သူတော့ အတော်သိတဲ့သူ၊ တတ်တဲ့သူလို့ ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဲလို တစ်ခါတစ်လေ ထင်မိယောင်မှားခဲ့ဖူးတာမို့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ နားလည်ပါတယ်။
ဒါပေသည့် ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဝေဖန်ရေး အင်မတန် သန်တဲ့အပြင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ဘယ်တုန်းကမှ မညှာတတ်တာမို့ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုလည်း ကိုယ့်ဘာသာ သိလာမိတတ်ပါတယ်။ သည်အခါမှာ ငါသိ ငါတတ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးက ဘယ်လောက်ကလေး ဖေးဖေး ထမိသွားသွား၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘွားခနဲ ပြန်ပြန်မြင်မိနေတတ်တယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်က အနိုင်လိုချင်သူလည်း မဟုတ်ဘူး။ ပြိုင်ဖို့လည်း သိပ်စိတ်ဝင်စားတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အဲတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ချယ်လှယ်ဖို့ အားမထုတ်ဘူး။ ဘိုနီ့ကိုဆို ရှေ့မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အမြဲတစေ အကျောပေးထားခဲ့တာ။
အဲသလို အကျောပေးထားလျက်ကနဲ့ ဘယ်အရာမှာဖြစ်ဖြစ် သူက အနိုင်လိုချင်ပါတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး နိုင်ငံရေး အယူအဆတွေမှာတောင်မှ သူပြောတာမှ အမှန် လုပ်တတ်ချင်တယ်။
ကျွန်တော်က သူနဲ့ဆို ဖက်ကို မပြောပါဘူး။ သူသာအမှန်၊ ကျန်တဲ့သူအမှားဆိုတဲ့ သူ့အယူဝါဒကို တစ်စွန်းတစ်စမှ မထိပါးမိအောင် အသာလေး ငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်။ အေးတာပေါ့။ မောင်မင်းကြီးသားလည်း ကျေနပ်၊ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ထဲက ကျိတ်ပြုံး။ ဘယ်လောက် နိပ်သလဲ။
သူနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာ တစ်ချက်လည်း ရှိဖူးတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော် ဘွဲ့ယူတဲ့ အချိန်မှာပါ။
ကျွန်တော် ဘွဲ့ယူတာကို လိုက်ခဲ့ပါရစေလို့ သူက အလေးအနက် တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ အဖြစ်ပါပဲ။ သူ့အစ်မကြီးက ဆရာဝန်ပါ။ သူ့အစ်မ ဘွဲ့ယူတုန်းကလည်း သူ လိုက်ခွင့် မရခဲ့ဘူးတဲ့။ သူ့အစ်ကိုကတော့ ဘွဲ့မရပါဘူး။ သူ့အစ်မလေးကလည်း သိပ္ပံဘွဲ့ရပါပဲ။ မမလေး ဘွဲ့ယူတော့လည်း သူ လိုက်ခွင့် မရခဲ့ဘူး။ အဲတော့ ကျွန်တော် ဘွဲ့ယူတဲ့အခါ သူလိုက်ခဲ့ချင်တယ်၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမထဲ ရောက်ဖူးချင်တယ်လို့ သူပြောခဲ့တာပါ။
လိုက်ပေါ့။ ကျွန်တော် ဘွဲ့နှင်းသဘင်တက်တော့ လိုက်ပါသူက မေမေနဲ့ အဲဒီ့ကောင်ပါ။ အဲတုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ နှစ်ယောက်တွဲ ပုံလေးကို သူမဆုံးခင် တစ်နှစ်လောက် အလိုမှာ လူမှု ကွန်ရက်မှာ ပြန်တင်ပေးလိုက်တော့ မောင်မင်းကြီးသား ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်က ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိသူပါ။ အဲဒီ့ဘွဲ့ဟာ အလကားဘွဲ့မှန်း ကျွန်တော် အသိဆုံးပေါ့။ ကျွန်တော် တစ်လုံးမှ မတတ်တဲ့ ဘာသာရပ်အတွက် အသားလွတ်ကြီး ရလာတဲ့ ဘွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ ပညာတတ်များ ဗုံးပေါလအောဖြစ်ရေးမူ၊ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ ပညာတတ်နာ ရောဂါကို အထုပ်ဖြည်တဲ့ မူအရ တကယ့်ပညာတတ်တွေ နေရာမရရေးမှာ အုတ်အရောရော ကျောက်အရောရောတွေ ထည့်ပေးတဲ့နည်းကို သုံးခဲ့တာပါ။
ဗိုလ်နေ၀င်းနဲ့ ခေတ်ပြိုင် နိုင်ငံရေးသမား အားလုံးက ပညာတတ်ကြီးတွေပါ။ အဲဒါကို ဗိုလ်နေ၀င်းက ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ဘိုနီရဲ့ ဘွဲ့ရများအပေါ် မျက်မုန်းကျိုးနည်းကားနဲ့ အတော်မျက်မုန်းကျိုးပါတယ်။ သူ အာဏာ ရလာတဲ့အခါမှာတော့ ပညာတတ်တွေကို မြောင်းထဲအရောက်ပို့နည်းအဖြစ် ဆယ်တန်းကို ဗုံးပေါလအော အအောင်ပေး၊ တက္ကသိုလ်မှာလည်း ဗုံးပေါလအော ဘွဲ့ပေးတဲ့ စနစ်ကို ကျင့်သုံးလိုက်ပါတော့တယ်။ ဘွဲ့ယူစာတမ်း မရေးဘဲ၊ ဘာစီမံချက်မှ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး ရေးဆွဲမပြ၊ ဘာ ဘာသာရပ်စာအုပ်မှ မဖတ်ရဘဲ မူလတန်း ကျောင်းသားတွေလို အမေး-အဖြေလေးတွေ ကျက်ဖြေရုံနဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့တဲ့သူ ဘာတန်ဖိုး ရှိမှာလဲဗျာ။
အဲတော့ ဘွဲ့နှင်းသဘင် သွားတက်တယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ယူချင်လှတဲ့ အမေ ကျေနပ်အောင်ရယ်၊ မတွေ့တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အတန်းဖော်တွေနဲ့ ဟေးလား ၀ါးလားလုပ်ရအောင်ရယ် သွားတက်တာပါ။ ဂုဏ်ယူခြင်း အလျဉ်း မရှိတော့ပါဘူး။ တကယ် ဘွဲ့ယူပြီး ထွက်လာတော့ ဘွဲ့ဝတ်စုံကြီး ချွတ်၊ ကားပေါ်ပစ်ထည့်ပြီး ကျွန်တော် အင်မတန် သဘောကျတဲ့ အနောက်တိုင်း ၀တ်စုံနဲ့သာ ဓာတ်ပုံတွေ လှိုင်ပေါလယ်အောင် ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဘွဲ့ဝတ်စုံ မဆင်မြန်းနိုင်တဲ့ ဘိုနီ့အတွက်လည်း ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမထဲက ထွက်ပြီး မကြာခင်မှာ ဘွဲ့ဝတ်စုံကြီး ချွတ်ပစ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ကို ဘွဲ့ဝတ်ရုံနဲ့ မြင်ရပြီး မချိတင်ကဲ ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါ။
ကျွန်တော်က ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်သလို၊ လူမထင်တတ်သလို ဆောင့်ကြွားကြွား အတော်နိုင်မေယ့် တကယ်တမ်းမှာ အဲသလို လူစားမျိုးပါ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ထက် နိမ့်တယ်လို့ ယူဆထားမိတဲ့အခါမှာ စာနာ ညှာတာပြီး အမြင့်ကို တင်ပေးတတ်ပါတယ်။
ဘိုနီက တော်ပါတယ်။ နေရာတိုင်းတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ သူလည်း ဘုရား ရဟန္တာမှ မဟုတ်တာလေ။ သို့ပေမယ့် သူ့ကို ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ထက် နိမ့်တဲ့သူအဖြစ် မြင်ထားပါတယ်။ အနီးကပ်ပေါင်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတော့ သူ့အားနည်းချက်တွေကို ကျွန်တော် သိနေတယ်။ အဓိကကတော့ သူ့ရဲ့ အတွေးအခေါ်ပိုင်းကို နိမ့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ကွန်မြူနစ်စကားနဲ့ ပြောရင်တော့ သူ့မှာ ဓနရှင်လူတန်းစား ဉာဉ် အပြည့်နဲ့ပေါ့။
သူ့ဘ၀မှာ တစ်ခါမှ မငတ်ဖူးဘူး။ စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ မနေခဲ့ရဖူးဘူး။ လမ်းဘေးမှာလည်း သူ မအိပ်ဖူးပါဘူး။ သူများအိမ်လည်း ကပ်မနေဖူးဘူး။ တစ်ဘ၀လုံး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာနဲ့၊ စားစရာ သောက်စရာ ဖူဖူလုံလုံနဲ့ နေသွားခဲ့သူပါ။
အဲတော့ ဘ၀အမြင်ချင်းယှဉ်ရင် သူ့ကို ကျွန်တော်က နိမ့်တယ်လို့ အမြဲယူဆပါတယ်။ အဲဒါ ငယ်ငယ်ကတည်းကပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ အမြဲအနိုင်ယူချင်တတ်တဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော် ဘာမှ မပြောဘဲ အစစ အရာရာမှာ အလျှော့ပေးခဲ့တာလည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ကို ချယ်လှယ်ချင်တိုင်း ချယ်လှယ်နေသမျှကိုလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး လိုက်လျောနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရည်းစားနှစ်ယောက်ကိစ္စကတော့ သူအဲသလို ချယ်လှယ်တာက နှစ်ယောက်စာတည်းဆိုတော့ နည်းတောင် နည်းသေးတယ် မှတ်သဗျ။ 🙂 😀
သူချယ်လှယ်တတ်ပုံကတော့ သူ့စီပိုးကိုတောင် သူချယ်လှယ်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက် စီပိုးနဲ့ နေသွားတယ်ဆိုတာ နှယ်နှယ် မှတ်လို့ပါ။ သူအင်မတန်ကြိုက်တဲ့ ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်ကို တိခနဲ ဖြတ်ချလိုက်ပြီး သူ့အသက်ကို ပိုးမွေးသလို မွေးယူခဲ့တာ အင်မတန် ချီးကျူးစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ သူ့ရောဂါကို အကောင်းဆုံး ဆေးဝါးတွေနဲ့ လစဉ် ငွေ သိန်းပေါင်းများစွာ အကုန်ခံပြီး အံတုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အသဲအစားထိုး ကုသမှုအထိ ခံယူခဲ့တယ်။ သည်မှာလည်း သူ့ရောဂါကို သူ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုကိုဆုံးသွားချိန်မှာ ကျွန်တော် သိလိုက်တယ်။ (သူ့အစ်ကိုကို သူခေါ်သလို ကျွန်တော်ကလည်း ကိုကိုလို့ပဲ တစ်သက်လုံး ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အစ်မတွေကိုလည်း သူခေါ်သလိုပဲ မမကြီးနဲ့ မမလေးလို့ ခေါ်ခဲ့တဲ့အထိ သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က ရင်းခဲ့ဖူးတာပါ။) သည်ကောင် သွားတော့မယ်ဆိုတာပါ။
ကျွန်တော့်အတွက်တောင် ကိုကိုဟာ စံနမူနာ ယူခဲ့ရတဲ့သူ ဖြစ်တာမို့ သူ့အတွက်ဆို ပြောစရာ မရှိပါဘူး။ သူက သူ့အစ်ကိုကို သိပ်ချစ်ပါတယ်။ သူ့အစ်ကိုကလည်း အူလမ်းကြောင်း ကင်ဆာကို အံတုပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အသက်ရှင် နေထိုင်သွားခဲ့သူပါ။ အစာဟောင်းစွန့်တဲ့ အူအပိုင်းကို ဖြတ်တောက် ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီး လူကောင်းတစ်ယောက်လို နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက်အထိ နေသွားခဲ့တာပါ။
အဲဒီ့ကိုကို တိမ်းပါးသွားချိန်မှာ သူ့ ထိခိုက်မှုကို ကျွန်တော် ဖျတ်ခနဲ သတိထားလိုက်မိတယ်။ အရာရာကို ချယ်လှယ် လွှမ်းမိုး ပိုင်စိုးချင်တဲ့၊ အနိုင်ရချင်တဲ့ ကျွန်တော့် ချစ်သူငယ်ချင်းဟာ ဗျာဓိနဲ့ မရဏရဲ့ သဘောကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စောကြောမိသွားခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အဲဒီ့နောက်မှာတော့ သူ့ကျန်းမာရေးက ယိုင်လဲ ပြိုဆင်းလာတယ်။ ကျွန်တော် ကြားနေခဲ့ရတယ်။ တစ်ချီမှာ ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တော့ သူမျက်ရည်ကျတာကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာ သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ပေါင်းလာခဲ့တာ နှစ် ၄၀ ကျော်လို့ ၄၅ နှစ်ထဲကိုတောင် ရောက်နေပါပြီ။ အဲဒီ့ ၄၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာ သည်ကောင် မျက်ရည်ကျတာကို ကျွန်တော် ပထမဆုံးအကြိမ် မြင်ဖူးလိုက်တာပါပဲ။
အင်မတန် မာန်ကြီးသူတစ်ယောက် မာန်ချလိုက်ပြီဆိုတာကို သတိထားလိုက်မိခြင်းနဲ့အတူ သူလည်း သွားတော့မယ်ဆိုတာကိုပါ ရိပ်စားမိခဲ့ပါတယ်။ မကြာပါဘူး။ သူမျက်ရည်ကျတာ မြင်လိုက်ရပြီး တစ်နှစ်ကျော် အကြာမှာ တကယ်သွားတော့တာပါပဲ။
အရာရာမှာ အကွက်ချ တွက်ဆ စီမံ ချယ်လှယ်ချင်ပြီး အင်မတန် မာန်ကြီးလှတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းဟာ အနိစ္စရဲ့ သဘောကိုတော့ မြင်သွားတန်လောက်မယ် ထင်ပါတယ်လေ။
ယူတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘာဝနာပါ။ ကျွန်တော်တို့ လက်တစ်ကမ်းမှာ ရှိတဲ့ သေခြင်းတရားကို ကျွန်တော်တို့ ချယ်လှယ်နိုင်စွမ်း လုံးဝ မရှိပါဘူး။ သည်လောက် ငွေကုန်ကြေးကျခံ၊ သည်လောက် ဂရုစိုက်တဲ့ကြားက တစ်ချက်ကလေး လစ်ဟာသွားတာနဲ့တင် ကျောက်ကပ်မှာ ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာကို နှောင်းမှ သိလိုက်ရာက အသက်ပေးလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ သတိထားဆင်ခြင်နေထိုင်ခဲ့ရုံမက အစားထိုး လဲလှယ် ထားတဲ့ အသည်းကိုတော့ သူအနိုင်ရလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားတစ်နေရာက ထဖောက်တာကိုတော့ သူ ဘယ်လိုမှ အံမတုနိုင်ရှာခဲ့တော့ပါဘူး။
ကျွန်တော့်မှာသာ သူ့လို စီပိုးရှိမယ်ဆိုရင် သူ့အရင် ကြွတာ ကြာလှပါပြီ။ အဓိကကတော့ သူ့လို ပိုက်ဆံ မတတ်နိုင်လို့ပါ။ အဲလိုကျတော့လည်း ပိုက်ဆံဆိုတာ အတော်ကောင်းသားလို့ တစ်ဖက်က တွေးမိပေမယ့် သက်တမ်းရှည်ရှည် နေရခြင်းကရော ကောင်းရဲ့လားလို့ စဉ်းစားမိသွားပြန်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်လို ဘာအာမခံချက်မှ မရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာ အသက်ရှည်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယ်ရှာသလိုသာ ဖြစ်နေမှာပဲလို့ တွေးနေမိပါတယ်။
ပွဲထဲက လူပြက်တွေ ပြောသလို စောစောသေတော့ စောစောအိပ်ရတာပေါ့လို့သာ အောက်မေ့ရမယ့် အခြေအနေပေါ့ဗျာ။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၀ ရက် (ဇင်းမယ်)
ဆယ်တန်းကို နှစ်နှစ်နေရတဲ့ အကြောင်းလေး ရေးမလို့ တန်းလန်းကနေ ဘိုနီ့ဆီ ချော်တောငေါ့သွားတာနဲ့ အဲဒီ့ဘက် ပြန်လှည့်လိုက်ပါရစေ။
ဆယ်တန်းတက်တော့ ကျွန်တော်နဲ့ ဘိုနီနဲ့က တအားလုံးနေပါပြီ။ မလုံးလည်း ခံနိုင်ရိုးလားဗျာ၊ ကျူရှင်သုံးခုမှာ ကျွန်တော်နဲ့ သူနဲ့က တစ်တန်းတည်း တစ်ချိန်တည်း တက်ကြတာဆိုတော့ တစ်ပတ်မှာ ခုနစ်ရက်လောက် တွေ့နေကြတာကိုး။
အဲတော့ အလွန်တွဲဖြစ်တာပေါ့။ စာမေးပွဲနားနီးလာတော့ သူက ချစ်ဝေဒနာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားနေရပါတယ်။ အဲဒါကို ကုစားဖို့အတွက် သူက သူငယ်ချင်းတွေ စာစုကျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အကြံကို ကြံစည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပျော်တာပေါ့။
အဲတုန်းက အတွင်းစွဲ၊ အပြင်စွဲဆိုတဲ့ လူ့စရိုက်သဘာဝတွေအကြောင်း ကျွန်တော် ဘယ်သိဦးမလဲဗျာ။ လူမှ ဆယ်တန်းတောင် မအောင်သေးတာ။ အဖော်ကောင်းရင် ငရဲအထိ လိုက်ဖို့ ၀န်မလေးတဲ့ အချိန်မျိုးပေါ့။ (အမှန်က ကျွန်တော်က အတွင်းစွဲသမား။ တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေးဆိုရင် ပိုအလုပ်ဖြစ်တယ်။ အများတကာနဲ့ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ အလုပ် မဖြစ်တတ်တဲ့လူစားမျိုးပါ။)
အဲတော့လည်း စာစုကျက်မယ်ဆိုတဲ့ အစီအမံထဲ ကျွန်တော် ပါသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စုတဲ့အိမ်က သူ့ဘိုးဘွားပိုင် အိမ်များစွာအနက်က ရွှေတောင်ကြားမှာ ရှိပြီး လူမနေဘဲ ပစ်ထားတာ နှစ်များစွာ ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ အိမ်ကြီးတစ်လုံးမှာပါ။
အိမ်ကြီးက ဓာတ်ရှင်တွေထဲက သရဲခြောက်တဲ့ အိမ်အိုကြီးလို တကယ့်ရှေးအိမ်ကြီးပါ။ ဘိုနီတို့ မိသားစု နေခဲ့တဲ့ ကိုယ်ပိုင်လမ်းသွယ်တစ်ခုထဲက တစ်လုံးတည်းသော အိမ်ဟာလည်းပဲ အဲသလို အိမ်မျိုးကြီးပါပဲ။ ဘိုနီတို့ မိသားစု နေတဲ့အိမ်ကတော့ လူနေနေတာမို့ သိပ်ချောက်ချားစရာ မကောင်းလှပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ စုပြီး စာသွားကျက်ကြတဲ့ အိမ်ကြီးကတော့ ဖုံအလူးလူး၊ ပရိဘောဂရယ်လို့ တစ်ခုမှ မရှိတဲ့ အိမ်ကြီးမို့ အမြင်နဲ့တင် အတော်ချောက်ချားစရာကြီးပါပဲ။
အဖော်အပေါင်းအစုံအလင်နဲ့ဆိုတော့ ဘယ်ချောက်ချားတော့မလဲလေ။ အပေါ်ထပ်က အခန်းကျယ် တစ်ခန်းကို ယူလိုက်ကြပြီး သန့်ရှင်းရေးလေး ဘာလေး တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ကာ စုနေလိုက်ကြတယ်ပေါ့။
အဖေက အဲဒီ့အိမ်ကို လိုက်ပို့ပါတယ်။ ပြန်ကြိုပေးပါတယ်။ သူ့သား စာကျက်နေတယ် မှတ်ရှာတာကိုး။ ကျွန်တော်တို့က စာကျက်တာကို အကြောင်းပြပြီး ဟေးလားဝါးလား လုပ်နေကြ၊ ဂီတာတီးကြ၊ လေပစ်ကြနဲ့ ပျော်နေကြတာပါ။
လိုက်ပို့ပြီး ပထမနေ့မှာတင် အဖေက အဲဒီ့အိမ်ကြီးရဲ့ အတွင်းပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံကို တစ်သဝေမတိမ်း ပြောပါတော့တယ်။ တကယ်က အဖေက အိမ်ထဲကို ၀င်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ခြံအကျယ်ကြီးရဲ့ အ၀မှာတင် ထားရစ်ခဲ့၊ လာကြိုပေးခဲ့တာပါ။ အဲဒါကို အိမ်ရဲ့ အတွင်းပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံကို အတိအကျ ပြောနေတာ့ ကျွန်တော်လည်း တော်တော် အံ့အားသင့်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေက သူပဲ အကြားအမြင်ရနေသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့။ ပြောပေါက်ကို ပြောပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲလို့ အကျိုးအကြောင်း မေးတော့လည်း ဘာမှ ရေရေရာရာ မပြောဘူး။ သူ့မျက်စိထဲမှာ မြင်ကြည့်တာတဲ့ဗျား။
အတော်မအီမလည်နိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ဘိုနီ့ကို ပြောပြတာပေါ့။ ဘိုနီလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ အတော် အတွေးရကျပ်သွားတယ်။ ဘယ့်နှယ်က ဘယ့်နှယ်၊ ကျွန်တော့်အဖေက လူမနေတဲ့ အိမ်ကြီးရဲ့ အတွင်းပိုင်းကို သိနေရတာလဲပေါ့။ အဖေနဲ့ သူတို့နဲ့ဆိုတာလည်း ဘာအဆက်အစပ်မှ မရှိ။ သူတို့က သူကြွယ်တွေ။ ကျွန်တော့်အဖေက အငှားယာဉ်မောင်း။ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။
အဖေဟာ (ကျွန်တော့်အဖေပီပီလို့ ပြောရမလား မသိဘူး) တော်တော့်ကို မနေတတ် မထိုင်တတ် ရှိတာပါ။ သူ မပြောဘဲနေလို့လည်း ဘာမှ ဖြစ်မှာ မဟုတ်တာကို သက်သက်မဲ့ အဲဒီ့စကားကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကိုလည်း မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ဆယ်တန်းကြီးများတောင် ရောက်နေကြပြီ။ ကလေးမှ မဟုတ်တော့တာ။ သူပြောသမျှ ယုံကြမယ့် အရွယ်တွေ မဟုတ်တော့ဘူးလေ။
ဘိုနီလည်း သည်ကိစ္စကို အတော် မခံချိ မခံသာဖြစ်နေမှာပါပဲ။ ကျွန်တော်တောင် ဖြစ်သေးတာလေ။ ဘယ့်နှယ်က ဘယ့်နှယ် နံရံပေါ်မှာ ဘာရှိတယ်၊ လှေကားက တက်သွားရင် ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်အခန်းရဲ့ တံခါးပေါက်က ဘယ်ကဲ့သို့ ဘယ်ချမ်းသာဆိုတာကြီးက ဟုတ်ကို မဟုတ်ဘူး။
မကြာပါဘူးဗျာ။ တစ်ပတ်လောက်နေတော့ ကိုရွှေဘိုနီ အဖြေတွေ့လာပါတယ်။ သူ့အဖေအပါအ၀င် လူကြီးတွေ စုပြီး အဲဒီ့အိမ်မှာ အပြာကား ကြည့်ခဲ့ကြဖူးပါသတဲ့ဗျား။ အဲဒီ့တုန်းက လူစုထဲမှာ အဖေပါသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်လောက်ကို ရိုးစင်းပါသဗျား။
အတန်းထဲက စာကြမ်းပိုးတွေရဲ့ အဖြစ်
အဲဒီ့ခေတ်က အပြာကားကြည့်ဖုိ့ဆိုတာ မလွယ်ဘူး ခင်ဗျ။ ဗှီဒီယို ဝေးစွ၊ မြန်မာပြည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြား ဆိုတာတောင် ရောက်မလာသေးတဲ့အချိန်ပါ။ အဖေဆို သေသာသွားတယ်၊ ရုပ်မြင်သံကြားဆိုတာကို မြင်ဖူးမသွားရှာဘူး။
ကျွန်တော်တို့ အဲဒီ့နှစ်က ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း ထွက်တဲ့အခါကျတော့လည်း အပြာကား ကြည့်ခဲ့ကြဖူးပါသေးတယ်။ အဲတုန်းက ကြည့်ခဲ့ရပုံကို ပြန်ဖောက်သည်ချချင်တဲ့အတွက် အဲဒီ့ကို ခုန်ပျံ ကျော်လွှားလိုက်ရပြန်တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ အဲဒီ့အိမ်မှ စာစုကျက်တဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံးကတော့ အောင်စာရင်း ထွက်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်မှ မအောင်ကြပါဘူး။ အောင်တဲ့ကောင်တွေက ကျွန်တော်တို့ အတန်းထဲကပါ။ ဘိုနီနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က ကျောင်းမတူတော့ သူ့အတန်းထဲက အောင်တဲ့သူတွေလည်း အောင်ကြပါလမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းက အောင်တဲ့ ကျွန်တော့် အတန်းဖော်တွေက ပညာထူးချွန်ကြသူတွေပါ။ တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ ရတဲ့ ကောင်တွေ၊ ငါးဘာသာ၊ အနည်းဆုံး လေးဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်က အခုခေတ်လို ဂုဏ်ထူးတွေ ဗုံးပေါလအော မပေးသေးပါဘူး။ ခြောက်ဘာသာ ဂုဏ်ထူးထွက်တဲ့သူ ဆုလို့ တစ်ပြည်လုံးမှ နှစ်ယောက်လား၊ သုံးယောက်လားပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ့ ပညာထူးချွန်တဲ့ မောင်တွေက ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဆိုတာကြီးကိုလည်း အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်ပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ သူတို့ရင်ထဲမှာ ဘယ်ကတည်းကမှန်း မသိ အောင်းထားခဲ့တဲ့ အပြာကား ကြည့်လိုခြင်း ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်တော်မူကြပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်က ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို သူတို့ကြားထဲ ပါသွားခဲ့တယ်ဆိုတာ မမှတ်မိတော့ဘူး။
အဲတုန်းက ဘယ်သူတွေ ပါခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း အကုန်အစင်မမှတ်မိတော့ဘူး။ တစ်အုပ်ကြီးတော့ တစ်အုပ်ကြီးပဲ။
သွားကြည့်ရတဲ့ နေရာက အတန်းထဲက စာတော်သူ လူအေးတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်မှာပါ။ သူ့အဘိုးက ၀န်ကြီး ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ တကယ့် ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းဖြစ်သလို လူကုံထံရပ်ကွက်မှာ နေကြပါတယ်။ ပြောရရင် ဦးနေ၀င်းအိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးလှတဲ့ နေရာလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့ရဲ့။ ခြံကလည်း တော်တော်တော့ ကျယ်ပါတယ်။ အိမ်မကြီးပေါ်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မရောက်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ခြံဝင်းထဲက ကားဂိုဒေါင်လို ဟာမျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့ အုပ်စု စုကြရတာပါ။ ဆယ်တန်းကို ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်ထားသူရဲ့ မိဘများဆိုတော့လည်း သည်ကောင်တွေ မဟုတ်တာ လုပ်ကြမယ်မှန်း သိသိနဲ့ လွှတ်ပေးထားတာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။
လူက နည်းနည်း မဟုတ်ဘူးဗျ။ မရှိဘူးဆို ဆယ်ယောက်၊ ဆယ့်ငါးယောက်တော့ ရှိမယ်။
ဗှီဒီယိုခေတ်မဟုတ်တော့ ရုပ်ရှင်ပေါ့ဗျာ။ ရုပ်ရှင်ဆိုလို့လည်း ရုံမှာ ကြည့်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်မျိုးလို တခမ်းတနား မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ၈ မီလီမီတာ ပြစက်အသေးလေးနဲ့ ပြရတာ။ ပိတ်ကားပေါ်မှာ ပေါ်လာတဲ့အခါ အလွန်ဆုံးမှ လက်မ ၂၀ ရုပ်မြင်သံကြား ဖန်သားပြင်လောက်ကလေး ပေါ်တာပါ။
စက်ကို ငှားရသလို စက်ဆရာကလည်း တစ်ခါတည်း တွဲပြီး ပါလာပါတယ်။ စက်ဆရာက ကုလား တစ်ယောက်ပါ။ သူနဲ့အတူ သူ့တပည့်တစ်ယောက်တောင် ပါလာသေး မှတ်တယ်။ အဲဒါကိုလည်း ဘယ်သူ့ အစွမ်းအစနဲ့ ငှားလာသလဲတော့ မသိဘူး။ တစ်ယောက် တစ်ကျပ် နှစ်ကျပ် စုထည့်ကြပြီး ငှားကြရတာပါ။ ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ သည်ကိစ္စကို ဦးဆောင်သူက နောက်နှစ်နှစ်ကျော် သုံးနှစ်အကြာ ကျွန်တော် အငှားယာဉ်မောင်းဘ၀ ရောက်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်ကို ပြည့်တန်ဆာ ရှာပေးဖို့ လာပြောရာမှာ (ရှေ့မှာ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ) ဦးဆောင်လာသူ ကိုယ်တော်မြတ်ပဲ ဖြစ်လောက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လိုပဲ နောက်ဖေးပေါက်ကနေ ၀င်လာတဲ့ စက်ဆရာလည်း ရောက်ပြီ။ လူလည်း စုံပြီ။ ခက်တာက နေ့ခင်း ကြောင်တောင်ကြီး။ နေရာကလည်း သွပ်မိုး ပျဉ်ထောင် ကားဂိုဒေါင်။ ပူလိုက်အိုက်လိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့ဗျာ။
ရုပ်ရှင်ဆိုတာက မှောင်ထဲမှာ ပြမှ မြင်ရတာမျိုး။ အလင်းရောင်နည်းနည်း ၀င်ရင်ကို ကြည်ကြည်လင်လင် မြင်ရဖို့ အင်မတန် ခက်လှတယ်။ အဲတော့ ဂိုဒေါင်တံခါးတွေ အကုန်ပိတ်ပေါ့။ ဒါလည်း မလုံဘူး။ ခေါင်မိုးအောက်နား နံရံက သံဆန်ကာကွက်နေရာတွေကနေ အလင်းရောင် စူးစူးက ထိုးဝင်နေပါရောလား။
ဂိုဒေါင်ထဲမှာ ရှိသမျှ ကတ်ထူပြားတွေ၊ ကတ်ထူပုံးတွေကို ကတ်ထူးပြားဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာတွေနဲ့ တက်ကာကြ။ ဒါလည်း မလုံလောက်။ အဲတော့ ပုဆိုးဝတ်လာတဲ့ကောင်တွေ ပုဆိုးတွေ ချွတ်ကြ။ ပေး… မင်းတို့ ပုဆိုးတွေဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော့်ပုဆိုးလည်း ပေးလိုက်ရသေးတယ်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မူစလင်။ သူ့အဖေက အကောက်ခွန်မှာ လုပ်တယ် ထင်တယ်။ မြို့ထဲက သူ့အိမ်ကိုလည်း ရောက်ဖူးတယ်။ သူ့အိမ်မှာ ရေဒီယိုဂရမ်ဆိုတဲ့ ရေဒီယိုနဲ့ ဓာတ်ပြား တွဲဖွင့်လို့ရတဲ့ စက်ကြီး ရှိပြီး အဲဒီ့အိမ်မှာ ၀င်းဦးရဲ့ လော(န်)(ဂ်)ပလေး ဓာတ်ပြားကို စနားထောင်ဖူးတာလည်း မှတ်မိနေတယ်။ (အဲဒီ့ ရေဒီယို ဂရမ်နဲ့ ဓာတ်ပြားကိစ္စ ပြီးမှ ရှင်းပြပါမယ်။)
အဲဒီ့သူငယ်ချင်းကလည်း လူအေး။ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ အင်မတန် ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့သူ။ သူစကားပြောပုံက ချစ်စရာလေး။ ဘယ်လိုလေးမှန်း မသိဘူး။ မပွင့်တပွင့်နဲ့ဗျ။ ပြောရင်းနဲ့ အဲဒီ့ သူငယ်ချင်းတောင် မျက်စိထဲ ပြန်မြင်လာတယ်။ ဆရာဝန် ဖြစ်သွားတာ သိလိုက်တယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းမှာ ဂျီပီထိုင်နေတယ်ဆိုလား ကြားလိုက်သေးတယ်။ အဲဒီ့နောက် သူအပါအ၀င် ဘယ်သူနဲ့မှ အဆက်အသွယ် မရတော့တာ ယနေ့ထက်တိုင်ပါပဲ။
(အဲဒီ့ အတန်းထဲက သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ရှားရှားပါးပါး တစ်ယောက်ကိုပဲ Facebook မှာ ပြန်တွေ့ရတယ်။ စင်္ကာပူ နိုင်ငံသား ဧရာမ ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်နေသူပေါ့။ သူကတစ်ဆင့် တခြား သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စလည်း Facebook မှာ ရှိနေမှန်း သိပေမယ့် သူတို့က ကျွန်တော့်ကို သိပ်အဖက်လုပ်ချင်ပုံ မရတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အသာငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်။)
ပြောလက်စ ပြန်ကောက်ရင်တော့ အဲဒီ့ မူစလင် သူငယ်ချင်းလည်း ပုဆိုးချွတ်ပေးရတဲ့အထဲမှာ ပါသဗျ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အတွင်းခံ ဘောင်းဘီတွေ ကိုယ်စီနဲ့မို့ အလွယ်တကူ ချွတ်ပေးခဲ့ကြတာပါဗျာ။ အဲဒီ့ သူငယ်ချင်းလည်း အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ပဲဗျ။ အခုခေတ် Boxer လို့ ခေါ်ကြတဲ့ လက်ဝှေ့ထိုးသူများ လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်းမှာ ၀တ်ကြတဲ့ ဘောင်းဘီလို ဘောင်းဘီတို တိုတိုပွပွပါ။ ရေးရင်းနဲ့ ရှက်နေတဲ့ သူ့မျက်ခွက်ကြီးတောင် ပြန်မြင်လာသလို သူ့အပြင်အဆင်ပါ ပြန်မြင်လာတယ်။
သူက ဆံပင်လှိုင်းတွန့်နဲ့ ခေါင်းကို အမြဲတမ်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြီးထားတယ်။ သူ့ဆံပင်ကလည်း ကျွန်တော့် ဆံပင်လို လေတိုက်တာနဲ့ ဖွာလံကျဲသွားတတ်တဲ့ ဆံပင်အပျော့မျိုး မဟုတ်ဘူး။ ပြာပြားကပ်ကပ် သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကလေး။
အိုက်စပ်လာတာမို့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ပေါ်က ရှပ်အင်္ကျီတွေကို ချွတ်ထားနှင့်ကြပြီးပြီ။ အဲဒီ့အချိန်က ယောက်ျားကြီးငယ်တွေမှာ စွပ်ကျယ်ချိုင်းပြတ်ကို အတွင်းက ခံဝတ်တဲ့ အလေ့အထက တွင်ကျယ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက စွပ်ကျယ်ချိုင်းပြတ်လေးတွေနဲ့။ မူစလင် သူငယ်ချင်းကလည်း စွပ်ကျယ် ချိုင်းပြတ်အဖြူလေးနဲ့။ သူကလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ အကောင်သေးသေး၊ လူဗလံလေး။ (ကျွန်တော်က အခုကျတော့မှသာ လေးလုံးခြောက်ဖက်ကြီး ဖြစ်လာတာ။ အသက် ၃၀ ကျော်အထိက ဗလံလေးရယ်။)
အဲဒီ့သူငယ်ချင်းရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကလည်း အဖြူခင်ဗျ။ သူ့အသားက နည်းနည်းညိုတယ်။ ဘောင်းဘီဖြူ၊ စွပ်ကျယ်ဖြူနဲ့ ရှက်နေတဲ့ သူ့မျက်ခွက်ဟာ အဲဒီ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘလူးပစ်ချာကြည့်ပွဲ စွန့်စားခန်း မဟာကြီးရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းအဖြစ် ကျွန်တော့် မျက်စိထဲမှာ ထင်းထင်းကြီး ကျန်နေသေးသဗျာ။ ကျန်တဲ့ကောင်တွေကို ကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူး။
အိမ်ရှင်ကောင်က မျက်မှန်နဲ့။ သူကလည်း ပိုးဟပ်ဖြူလေးလို ဗလံလေးပဲ။ သူလည်း စကား အင်မတန် နည်းတယ်။ လူပုံက ဖြူဖြူနွဲ့နွဲ့ရယ်။ အဲဒီ့ကောင်လည်း စွပ်ကျယ်လေးနဲ့ ရမ်းတမ်း ရမ်းတမ်း လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံလည်း ပြန်မြင်ယောင်မိတယ်။ ဘယ်သူတွေ ပါမှန်းတော့ မှတ်ကို မမှတ်မိတော့ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ပုဆိုးတွေ ကုန်ပြီဆိုတော့မှ ကားဂိုဒေါင်လည်း ရုပ်ရှင်ကြည့်နိုင်လောက်တဲ့ အမှောင်ကို ရပါတော့တယ်။
တုန်ခြင်း မှုန်ခြင်း သည်းခံပါဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ဖလင်က ဘယ်နှခုနှစ်ကတည်းက ဖလင်၊ ဘယ်နှကြိမ် ပြထားပြီးသားမှန်း မသိဘူ။ တုန်တုန်ချိချိနဲ့ ကြည့်ရပါတယ်။ ဘာသံမှလည်း မထွက်ပါဘူး။ အသံတိတ်ကားပေါ့ ခင်ဗျာ။ ကြားရတဲ့ အသံကတော့ ဓာတ်ရှင်ပြစက်လည်သံ တဂျောက်ဂျောက်ပါပဲ။
ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ အဲသလို တုန်တုန်မှုန်မှုန်ကိုပဲ ပြူးဖြဲပြီး ကြည့်ခဲ့ရတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မဟာ စွန့်စားခန်းကြီးပါ။ ဘ၀မှာ ပထမဆုံး ကြည့်ဖူးတဲ့ အပြာကားပါပဲ။ ဘာတွေ မြင်လိုက်ရလဲ ဆိုတာလည်း မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ သြော်… ကြည့်ခဲ့ဖူးပါ၏ဆိုတာလောက်ပါပဲ။ အရောင်ကလည်း မကောင်း၊ အရည်အသွေးကလည်း မကောင်းတာပဲ မှတ်မိပါတယ်။ အမှတ်မိဆုံးကတော့ ဟိုဗလံနှစ်ကောင်ပေါ့။ 🙂
အပြာကားကို အဲလို ကြည့်ကြရတာဆိုတော့ အဖေတို့မှာလည်း အဲလိုပဲ ကြည့်ခဲ့ရမယ်ဆိုတာ စာဖတ် ပရိသတ်မှန်းဆနိုင်မှာပါ။
လူကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့လို ပုဆိုးတွေ ချွတ်ကာရတဲ့အခြေအနေအထိ ရောက်ခဲ့ရဖို့ အကြောင်းနည်းပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဘိုနီ့အဖေက သူကြွယ်မို့ သူ့ဆီမှာ အဲလို အိမ်သုံး ၈ မီလီမီတာ ရုပ်ရှင်ပြစက်သာမက ၈ မီလီမီတာ ဖလင်နဲ့ ရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင် ခယ်မရာပါ ရှိမှန်း နောက်ကျတော့ ကျွန်တော် သိလာပါတယ်။ အဲတော့ သူ့စက်ကို သုံးခဲ့ကြတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် အငှားလိုက်တဲ့ စက်ထက်တော့ အရည်အသွေး ပိုကောင်းမှာပါ။ ဖလင်ကတော့ ဖန်တစ်ရာတေ ကြေမွနေတဲ့ ဖလင်ပဲဆိုရင်တော့ သူတို့သည်လည်း ကျွန်တော်တို့လိုပဲ နှမ်းထွက် ကိုက်ချင်မှာ ကိုက်တော့မှာပါ။
ဘိုနီ့ဆီက အဲဒီ့ အဖြေထွက်လာတော့ ကျွန်တော်လည်း ဘ၀င်ကျသွားပါတယ်။ ကျွန်တော် မသိလိုက်ဘဲ ကျွန်တော့်အဖေ အကြားအမြင်ရသွား၊ ထွက်ရပ်ပေါက်သွားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း သဘောပေါက်လာရပါတယ်။
ဖအေတိုင်း သည်လိုပဲလားတော့ မပြောတတ်
အဖေဟာ အဲလိုလူမျိုးပါ။ သူ မပြောဘဲ ထားလည်း ရလျက်နဲ့ သက်သက်မဲ့ (ကိုယ့်အဖေ ကိုယ်ပြောတာမို့ ကန်တော့ပါရဲ့ဗျာ) လျှာရှည်လိုက်တာပါ။ အကျိုးဆက်ကတော့ အဖေ့အပေါ်မှာ ကျွန်တော် အယုံအကြည် ပိုနည်းသွားတာပါပဲ။ အဖေဟာ အမှန်ကို မပြောတတ်သူ၊ လိမ်စရာမရှိ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ပြီး လိမ်တတ်သူလို့ နားလည်သိမှတ်သွားအောင် အဖေနဲ့ အတူနေခဲ့ရတဲ့ ၁၈ နှစ်ကျော် ၁၉ နှစ်နီးပါး သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ အဖေ လုပ်လုပ်သွားတာတွေက အတော် များပါတယ်။
မိဘတွေအတွက် ဆင်ခြင်စရာလို့ မြင်မိပါတယ်။
အဖေ့နေရာမှာ ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ ဗြောင်ပြောမိမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်နေရာမှာ ကျွန်တော့်သားသာဆိုရင်လည်း အမှန်ကို သိလာတဲ့အခါ “အဖေဗျာ… ကျွန်တော့်ဖြင့် အဟုတ်မှတ်လို့။ အဖေတို့ အဲဒီ့အိမ်မှာ ဘလူးပစ်(ခ်)ချာ သွားကြည့်ခဲ့ကြလို့ အဲဒီ့အိမ်ထဲကို အဖေ ရောက်ဖူးသွားတာကိုများဗျာ” လို့ ပြန်ပြောလာမှာ ကြားယောင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သားအဖ ဆက်ဆံရေးကတော့ အဲလို မဟုတ်ရှာဘူးခင်ဗျ။ အဲတော့ ကျွန်တော်လည်း အဖေ့ကို ဘာမှ ပြန်မပြောခဲ့။ အဖေကလည်း ကျွန်တော် ဘာမှ မသိရှာဘူးအမှတ်နဲ့ ကျေနပ်သွားခဲ့မယ် ထင်ပါတယ်။
ဘယ်မိဘမှ သားသမီးက လိမ်ရင် မကြိုက်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အဖေလည်း မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်က အဲလို အမှန်အတိုင်း မပြောတာတွေ များတဲ့အခါ သားသမီးကို မလိမ်နဲ့လို့ တွင်တွင် သွန်သင်နေရင်းက အလိမ်သင်သလို ဖြစ်တတ်တာကိုတော့ မိဘအတော်များများ သတိ မထားမိကြဘူး ထင်ပါတယ်။
တခြားသူတွေရဲ့ အဖေတွေလည်း အဲသလိုပဲလားတော့ ကျွန်တော် မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ဖအေ တစ်ယောက်ဖြစ်လာချိန်မှာတော့ အဲဒါကို အမြစ်ပြတ် ဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီ။ “ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့”ဆိုတဲ့ တလွဲမူကြီးကို မကျင့်သုံးတော့ပါဘူး။ “ငါ ရှေ့က လမ်းပြနေတယ်။ ငါလုပ်တဲ့အတိုင်းသာ လုပ်ကြကွ”ဆိုတဲ့ မူကို ကျင့်သုံးပါတယ်။
ပျဉ်းမနား မဟာမြိုင်တောရ ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ မိန့်မှာချက်ကလည်း ကျွန်တော့် နားထဲမှာ အမြဲစွဲနေတယ်။ “သူတစ်ပါးကို ပြင်ချင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရင်ပြင်ပါ”တဲ့။
ဟုတ်ကဲ့… ကျွန်တော်က ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေကို အကျင့်ကောင်းစေချင်ရင် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် အကျင့်ကောင်းမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က အကျင့်တန်နေပြီးတော့မှ သားသမီးတွေကို ကောင်းစေချင်နေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် အလကားကောင်ပဲဖြစ်နေတော့မှာပါ။
Soe Myat Myo Shwe ဗျတ်ကနဲ ရပ်ပစ်လိုက်တာလေးတွေ နည်းနည်း လျှော့လို့မရဘူးလာဆရာရဲ့။ သံပုရာသီးစား လက်ဖက်ရည်သောက် နောက်တစ်ခါ လိမ္မော်ရည်သောက် ဆက်စပ်လို့ မရတဲ့ အရသာတွေတို့တိ တို့တိနဲ့ ပြီးတော့ ဝုန်းဆို ထမင်းစားပွဲကြီး ပျောက်သွားတဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့ ဆင်ဆင်လာတယ် ဆရာ့စာ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းက
Aung Thein Kyaw အဲ… ကျေးဇူးပါ။ အခုက ဗျတ်ခနဲ ရပ်တယ်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ စာမျက်နှာ အရေအတွက်နဲ့ ရပ်နေတာ။ တစ်နေ့ကို သည်ပမာဏလောက်ပဲ တင်မယ်လို့ ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ထားပြီး Word မှာ ၇ မျက်နှာ ရောက်တဲ့ နေရာမှာ ရပ်လိုက်တာ ဖြစ်နေတယ်။
အချိတ်အဆက်လေးနဲ့ တစ်ခုခုမှာ ဆုံးသွားအောင် ရပ်သင့်ကြောင်း အကြံပေးတာနားလည်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အခု သည်နေရာမှာ ရပ်တာက အမှန်အကန်ပါ။ နောက်ဆက်လာမှာက အကြောင်းအရာ နောက်တစ်ခုမို့ပေါ့။
Freddy Lynn အသစ်ဖြစ်သွားအောင် ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့၊ သမီးတို့ လုပ်သလို ဖေလိုက်လုပ်မယ် ဆိုရင်ရောချာ 😛 😛
Thor Zin ကျနော့်အတွက်တော့ ဒီတစ်ပိုင်းက အဆုံးသတ်ကျမှ ဖတ်ရတာ အရသာရှိတာ
Aung Thein Kyaw သက်ဆိုင်သူဆီ အဲဒီ့အပိုင်းလေး ကူးပြီး ပို့ပေးလိုက်ပါလား Ka Thor Zin 🙂 😀 😛
Thor Zin ဆရာ့နာမည် ခွက်ဒစ် ပေးပါ့မယ် ဆရာ 😀
ပြသနာပိုကြီးသွားရင် ဆရာနဲ့ရှင်း 😛 😛
Alex Moe အပြာကားလေးကြည့်ရဖို့ အရေးပင်ပန်းလိုက်ထှာ. ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဗီဒီယိုရုံတွေမှာ. မေတ္တာဘွဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းဆိုရင်. သေချာပေါက်ပဲ. ပန်ကာလေးနဲ့တစ်ရုံလုံးတိတ်ဆိတ်လို့ဟီးးး
‘Song Thiri’ ဒီရက်ပိုင်း ဖွဘုတ် မတက်ဖြစ်တာများလို့…. တက်ဖြစ်လဲ… ခဏတဖြုတ် ပုံတင်တာလောက်ပဲဆိုတော့.. လွတ်သွားတဲ့ အစုတ်ထုပ်တွေရှိသလို.. အမြန်ဖတ်ပြီး လိုက်ခ် လုပ်တာတွေလဲရှိတော့ ကွန်မန့်တ် တွေမပေးနိုင်တာ ခွင့်(စ်) လွှတ်ပါ ချာ (စ်) 😀
Aung Thein Kyaw သည်တိုင်းထားလိုက်ရင်လည်း ပြတ်သနာက ပိုသေးသွားမယ်လို့များ ယုံကြည်မိနေသေးလို့လား Ka Thor Zin 😀
Ko Thar Ngel အပြာကား လာကြည့် သွားတယ် ! အဲ့လေ … လာဖတ်သွားတယ် … ဆက်ရေးပါဆြာ ! လာဖတ်ပြီး ကွန်မန့် မချဖြစ်တာတော့ ရှိတာပေါ့
Aung Thein Kyaw ချောက်တွန်းတယ်လာ့… အဲလေ… အားပေးတယ်လာ့ 🙂
Ko Thar Ngel အမြဲလာဖတ်တယ် အလုပ်ထဲရောက်မှ ကွန်မန့် မချ လိုက်ခ် လုပ်တာပဲရှိတာ ))) အိမ်ရောက်မှ သေခြာဖတ်မယ် စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့ အိမ်ရောက်တော့ ကွန်မန့်ချဖို့ မေ့သွားရော
Nyunt Thaw ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေ ဖေါ်နေတာလား သူငယ်ချင်းရယ်
Aung Thein Kyaw အို… ဧရာမ ဆြာဝံဂျိးအကြောင်းပါဘူးလေ 🙂 😛
Nyunt Thaw ဧရာမလည်း မဟုတ်ရပါ အညတရ ရယ်ပါ ဟို ပုဆိုးချွတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ မုန်ဆလိန် ဆရာဝန်လေးက ကော့သောင်းမှာနော် ဆရာရေ
Aung Thein Kyaw ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ ကော့သောင်းကို အခုထက်ထိ တစ်ခေါက်မှ မရောက်ဖူးသေးဘူး။ ရောက်လည်း ရောက်ချင်သလို တူ့ဂိုလည်း တွေ့ချင်မိရသေးတယ်။
Nyunt Thaw သွားလည်သင့်ပါတယ် အခုတော့ အရင်လို မစည်ကားတော့ဘူးလို့ ကြားတယ် မြိတ် ထားဝယ် စီးပွားရေး ပိုပွင့်သွားပြီ
၂၀၁၅ ဧပြီလ ၂၅ ရက်
ရေဒီယိုဂရမ်၊ လော(န်)(ဂ်)ပလေးနဲ့ အဲဒီ့ ၈ မီလီမီတာ ဓာတ်ရှင်ပြစက်များနဲ့ သက်ဆိုင်တာများဘက်ကို နည်းနည်း ပြန်လှည့်လိုက်ပါရစေဦး။
ရေဒီယိုဂရမ် (Radiogram) ဟာ ရေဒီယိုနဲ့ Gramophone လို့ ခေါ်တဲ့ ဓာတ်စက် (ဓာတ်ပြားဖွင့်စက်)တို့ကို တွဲထားတာပါ။ Google ထဲက ရှာလို့ တွေ့တဲ့ ပုံတစ်ပုံကို တင်ပေးထားပါတယ်။
လူကုံထံတို့ရဲ့ အိမ်တွေမှာ ထားရှိကြတဲ့ ဧည့်ခန်းအဆောင်အယောင် တစ်ခုပါပဲ။ အခုခေတ် ရုပ်မြင်သံကြားတွေ ထားကြသလိုမျိုးပေါ့။ သို့ပေမယ့် ရိုးရိုး ရုပ်/သံစက်လိုတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ အကြီးစား ပိတ်ကားကြီးတွေနဲ့ ဟာမျိုး ထားကြသလိုပါ။ ရိုးရိုး လက်မ နှစ်ဆယ်လောက်က ရေဒီယိုလောက် သာမာန်အိမ်တွေမှာ ရှိတာမျိုးပေါ့။ ရေဒီယိုဂရယ်(မ်)ကတော့ ခုခေတ် Home Theatre အိမ်တွင်း ဓာတ်ရှင်ရုံလေးလိုမျိုးပေါ့။
ကိုရွှေဘိုနီတို့ အိမ်မှာလည်း ရှိပါတယ်။ သူ့အဖေက သူကြွယ်ဆိုတော့ အဲဒါတင်မက Akai ထိတ်(ပ်)ရခေါ့ဒါ အကောင်းစားကြီးက အစ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့အိမ်မှာ မမြင်ဖူးခင် ဟို အပြာကားကြည့်တုန်းက ရှက်နေခဲ့တဲ့ မူစလင် အတန်းဖော်ရဲ့ အိမ်မှာ အရင် အလုံးလိုက် မြင်ဖူးတာပါ။
ဓာတ်စက်ရိုးရိုးကိုတော့ မြင်ဖူးပါတယ်။ လောပိတကတည်းက မြင်ဖူးခဲ့တယ်တောင် ထင်တယ်။ ဟုတ်တယ်။ ညွန့်ဝင်းရဲ့ သိင်္ဂီသီချင်းကို ဓာတ်စက်က ဖွင့်တာ ကြားဖူးခဲ့တာ။ အိမ်ကို ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ဓာတ်စက် ရောက်လာတယ်တော့ မသိဘူး။ နောက်တစ်ပုဒ်က မာမာအေးရဲ့ နှစ်ကံပြိုင် ဖူးစာ သီချင်း ဖြစ်လိမ့်မယ်။ တင်တင်မြရဲ့ မင်္ဂလာမောင်မယ်သီချင်း (ဆရာမြို့မငြိမ်း) ကိုလည်း အဲတုန်းကပဲ နားထောင်ခဲ့ရတာပါ။ (တဖြည်းဖြည်း ပြန်မှတ်မိလာတာခင်ဗျ။)
အဲဒီ့ဓာတ်ပြားတွေကကျတော့ ဆင်ဂယ်(လ်)လို့ ခေါ်ရမယ် ထင်တယ်။
ဓာတ်ပြားတစ်ချပ်လုံးမှာ သီချင်းတစ်ပုဒ် ပါတာဗျ။ သီချင်းက သီချင်းအလယ်မှာ အကျအန ရပ်သွားတယ်။ တိုးလို့တန်းလန်း ရပ်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ သီချင်းကို အကျအန် ချပြီး ရပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ဖက်ကို လှန်လိုက်ရင် အဲဒီ့ သီချင်းအဆက်က အတောနဲ့ ဘာနဲ့ အကျအန ပြန် ပေါ်လာပါတယ်။ နမူနာ နားထောင်ချင်သူများ ထောင်ကြည့်လို့ ရအောင် မာမာအေးရဲ့ နှစ်ကံပြိုင် ဖူးစာ သီချင်း လင့်(ခ်)ကို တစ်ပါတည်း ပေးလိုက်ပါတယ်။ သီချင်းကိုတော့ ကိုဘိုခင် (အရင်က မန္တလေးမြို့မ အဖွဲ့ထဲကပါ နောက်တော့ မိုးကေသီ တီးဝိုင်း သတ်သတ် ဖွဲ့ခဲ့တယ်) ရေးတာပါ။
အဲဒီ့ နှစ်ကံပြိုင် ဖူးစာ သီချင်းရဲ့ နှစ်မိနစ် ၅၄ စက္ကန့်လောက်အရောက်မှာ ချစ်တာ ချစ်တာ ပဓာနလို့ ၀သုန်ဤမြေ သိကြားသက်သေတိုင်ဆိုပြီး သီချင်းကို ပိပိရိရိလေး ချလိုက်ချိန်မှာ ဓာတ်ပြားတစ်ခြမ်း ဆုံးသွားပါတယ်။ (အခု ဒွိကိန်းစနစ်နဲ့ အသံကို မျက်စိနဲ့ မြင်နိုင်တဲ့ ခေတ်မှာတော့ တစ်ဆက်တည်းလိုလို ခပ်ကပ်ကပ်လေး နားထောင်နိုင်ပြီပေါ့။)
ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်ကျော်ကတော့ သီချင်းက အဲလို ဆုံးသွားရင် လူက ငုတ်တုတ် ဆက်ထိုင်နေလို့ မရတော့ဘူး။ ထတဲ့ပြီး ဓာတ်ပြားက အပ်မောင်းတံကို နေရာတကျ ပြန်ထား။ ပြီးရင် ဓာတ်ပြားကို တယုတယလေး ဖြုတ်ယူလိုက်ပြီး တစ်ဖက်ကို လှန်။ နေရာတကျ ထည့်။ မောင်းတံကို ပြန်မလိုက်တာနဲ့ အောက်က ဓာတ်ပြားက လည်လာမယ်။ အဲဒါကိုမှ ဓာတ်ပြားရဲ့ အ၀န်းစပ်မှာ အပ်ကို ထိပေးလိုက်။ ရှဲရှဲ အသံများက စလာမယ်။ ပြီးရင် သီချင်း ဒုတိယပိုင်းအတွက် အတောလေးနဲ့ အချစ်စစ်အချစ်မှန် ခိုင်ခိုင် အသက်နဲ့ ထပ်တူပိုင်ပိုင်ဆိုပြီး မာမာအေး ဆက်ဆိုတာ နားထောင်ပေရော့ပဲ။
တော်တော် ဇိမ်မရှိတာနော်။ ဒါပေသည့် အဲလိုလေး နားထောင်ရတာကိုပဲ အဲဒီ့ခေတ်ကတော့ အတော် ဟုတ်နေတာ။
အရေအတွက်နဲ့ အရည်အချင်းတို့ရဲ့ သဘော
ကျွန်တော် စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ ဟိုခေတ်က အဆိုတော်တွေရဲ့ အောင်မြင်မှု သက်တမ်းက တာရှည်သလောက် အခုခေတ် အဆိုတော်တွေကျတော့ သက်တမ်း သိပ်မရှည်ရှာကြဘူး။ ဟိုခေတ်က နှစ် ၂၀ လောက် အောင်မြင်ကြပေမယ့် သည်ခေတ်ကျတော့ အဆိုတော် တစ်ယောက်ရဲ့ ပျမ်းမျှ သက်တမ်းက ငါးနှစ် ၀န်းကျင်ပဲ ရှိရှာကြတော့တယ်။
အဲဒါဟာ အရေအတွက်ကြောင့် ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ မာမာအေးတို့၊ တင်တင်မြတို့၊ တွံတေးသိန်းတန်တို့ ခေတ်က သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ်၊ ဓာတ်ပြားသစ်တစ်ချပ် ထွက်ဖို့အရေး အတော် စောင့်ရတယ်။ ထွက်လာလည်း ဓာတ်ပြားတစ်ချပ်၊ သီချင်းက တစ်ပုဒ်တည်းရယ်။
ကဆက်ခွေ ခေတ်ကစပြီး အဆိုတော်တွေဟာ တစ်ခွေကို ၁၄-၅ ပုဒ် ဆိုကုန်ကြရပါတော့တယ်။ တစ်ဝကြီး နားထောင်ရတာတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငါးခွေ၊ ဆယ်ခွေ လောက်ဆို ပုဒ်ရေ ၁၀၀ ကျော် နားထောင်ပြီးသွားသလို ဖြစ်နေပြီ။ အဲတော့ ညည်းငွေ့လာတယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမယ်ကလည်း မိုးရွာတုန်း ရေခံဆိုသလို အောင်မြင်တုန်းလေး နင်းကန် ထုတ်ကြပေတာကိုး။ အဲတော့ ခဏနဲ့ ရိုးအီကုန်ကြတယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ။
ထားပါတော့လေ။ အဲဒီ့ ဓာတ်ပြားတွေရဲ့ အချင်းက အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ၁၂ လက္မ၊ ၁၀ လက္မ၊ ၇ လက္မ ဆိုပြီးတော့ သုံးမျိုးပေါ့။ ဓာတ်ပြားလည်တဲ့နှုန်း (Revolutions per minute—rpm)ကလည်း အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဓာတ်ပြားလည်တဲ့ နှုန်းက မြန်တဲ့အခါ ဓာတ်ပြားတစ်ချပ်မှ သီချင်းက တစ်ဝက်ပဲ ဆန့်တော့တာပေါ့။
ဒါက မူလလက်ဟောင်း ဓာတ်ပြားတွေ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အဲဒါကို ကျော်လွှားဖို့အတွက် ဓာတ်ပြား လည်နှုန်းကို လျှော့ချလိုက်ကြရင်းက တစ်ချပ်မှာ နှစ်ပုဒ်ဆန့်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီ့ကမှ အချင်းငယ်တဲ့ ၇ လက္မ ဓာတ်ပြားလိုဟာမျိုးတောင် တစ်ချပ် နှစ်ပုဒ်ဆန့်လာတဲ့အထိပါပဲ။
အဲဒီ့ဓာတ်ပြားမှာမှ လော(န်)(ဂ်)ဖလေးဆိုတဲ့ ဓာတ်ပြားက သတ်သတ် ထပ်ပေါ်လာတယ်။ အဲဒါကျတော့ ဓာတ်ပြားကို လှန်စရာ မလိုတော့ဘဲ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို အစအဆုံး တောက်လျှောက် နားထောင်နိုင်တဲ့အပြင် ဓာတ်ပြားတစ်ချပ်ကို ဟိုဘက် သည်ဘက်ဖွင့်ရင် ၄၅ မိနစ်စာအထိ အသံသွင်းထားနိုင်လာတာမို့ သီချင်းပုဒ်ရေလည်း အများအပြား ပိုဆန့်လာပါတယ်။ တစ်ချပ်မှ ၁၂ ပုဒ်ကနေ ၁၆ ပုဒ်လောက်အထိလို့ ပျမ်းမျှ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လည်တဲ့နှုန်း အနှေးစားနဲ့ ဖွင့်ရတဲ့ ဓာတ်ပြားပေါ့။
ဗမာသီချင်းတွေထဲမှာတော့ အဲသလို Long Play (LP) ထုတ်ထားတာ အင်မတန် ရှားပါတယ်။ ၀င်းဦး တစ်ယောက်ပဲ LP နှစ်ချပ် ထုတ်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နှစ်ချပ်စလုံး မြို့မသီချင်းတွေချည်းပဲလို့တောင် ထင်တယ်။ သိပ်တော့ မသေချာဘူး။
အရင်က ကျွန်တော့်ဆီမှာ အဲဒီ့ထဲက တစ်ချပ် ရှိခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ဘယ်ချောင် ဘယ်ကြား ကပ်သွားတယ် မသိတော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဆီ ရှိဖူးတဲ့ အချပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ မပြီးသေးသော ပန်းချီကားတို့၊ သစ္စာတို့၊ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးတို့လို မြို့မငြိမ်း သီချင်းတွေ ပါခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ဓာတ်ပြားအပါအ၀င် ဓာတ်ပြားတွေအားလုံးကို အိမ်ရှုပ်လို့ ပစ်လိုက်ပါပြီ။
အဲ(လ်)ဗှစ်(စ်)ဆိုရင် သူ့ဂီတသက် ၁၉၅၆ မှ ၁၉၇၇ ခုနှစ် (၂၁ နှစ်) အတွင်း LP ပေါင်း ၇၀ ကျော် ထုတ်သွားခဲ့တဲ့သူပါ။ သူ့ဓာတ်ပြားလည်း ကျွန်တော့်ဆီမှာ သုံးချပ် ရှိဖူးပါတယ်။ အဲဒီ့ဓာတ်ပြားတွေက ကျွန်တော် အသက် ၃၀ မပြည့်ခင်လေးတင်ကျတော့မှ ဓာတ်စက်တစ်လုံးဝယ်ပြီး လျှောက်စုရင်းက ရှိလာခဲ့ဖူးတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
အပ်ကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ဥပစာများ
“ဓာတ်ပြားဟောင်း အပ်ကြောင်းထပ်”တို့၊ “အပ်ကြောင်းထပ်”တို့ဆိုတဲ့ ဥပစာ အသုံးအနှုန်းက အဲဒီ့က လာတာပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ groove လို့ ခေါ်တယ်။ ဗမာလိုတော့ “အပ်ကြောင်း”ပေါ့ဗျာ။ ဓာတ်ပြားပေါ်က အစင်းလေးတွေကို ပြောတာပါ။ (ပုံမှာ ရှု။) အဲဒီ့အပ်ကြောင်းတွေက သူ့အကြောလေးနဲ့သူ ဓာတ်ပြားရဲ့ အနားက စပြီး အလယ်မှာ ဆုံးသွားပါတယ်။ အပ်တပ်ထားတဲ့ မောင်းတံက အဲဒီ့အပ်ကြောင်းအတိုင်း လိုက်သွားပြီး သီချင်း၊ အသံသွင်းချက်ကို ဖတ်သွားပါတယ်။
ခဏခဏ ဖွင့်ဖန်များရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အကိုင်ကြမ်းရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ့ အပ်ကြောင်း (အပ်ချည်လောက်သာ ရှိတဲ့ မြောင်းပါးပါးလေး) က ပွန်းမိသွားပြီး တစ်နေရာတည်းမှာပဲ အပြန်ပြန် သွားနေပါတော့တယ်။ စောစောက နမူနာ ပေးထားခဲ့တဲ့ နှစ်ကံပြိုင်ဖူးစာရဲ့ တစ်နေရာမှာပဲ အပ်ကြောင်းက ထပ်နေပြီဆိုရင် မာမာအေးအသံနဲ့ “မောင်မယ် နှစ်ကံပြိုင်၊ မောင်မယ် နှစ်ကံပြိုင်၊ မောင်မယ် နှစ်ကံပြိုင်”ဆိုတာကို လူက ထပြီး မောင်းတံကို မရွှေ့မချင်း အီနေအောင် ကြားနေရတော့မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို အပ်ကြောင်းထပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
စကားတစ်ခွန်းကိုလည်း ခဏခဏ ပြောပြောနေတဲ့အခါ ဗမာတွေက အပ်ကြောင်းထပ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ stuck inagroove လို့ သုံးကြပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်တော့ ဗမာလို အထပ်ထပ် ပြောတာ၊ ခဏခဏ ပြောတာမျိုးနဲ့ သုံးတာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဒါပြီး ဒါ၊ ဒါပြီး ဒါပဲ လုပ်နေရတာကို ပြောချင်တဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။ After5years in this company, I don’t find anything exciting but I seem to be stuck inagroove. (သည်လုပ်ငန်းမှာ ငါးနှစ်လောက်လုပ်ပြီးသွားတော့ ဘာမှ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ မကောင်းတော့ဘူး။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဒါ ဒါပဲ လုပ်နေရသလိုကြီး။) ဆိုတာမျိုးပေါ့။
A needle stuck inagroove ဆိုရင်တော့ မေးခွန်းတစ်ခုကိုပဲ အထပ်ထပ် မေးနေတတ်တာကို ပြောတဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။ My girlfriend is suchaneedle stuck inagroove. (ကျုပ်ရည်းစားကတော့ တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ အထပ်ထပ် မေးတတ်တဲ့ မိန်းမစားမျိုးဗျို့) တစ်နည်းအားဖြင့် ခပ်ထူထူ ခပ်နနကို ပြောတဲ့အခါမှာ needle stuck inagroove လို့ ပြောတာပါပဲ။ ဗမာတို့ရဲ့ အပ်ကြောင်းထပ်နဲ့ တခြားစီပါ။
မူစလင် အတန်းဖော်ရဲ့ အိမ်မှာတုန်းကလည်း ၀င်းဦးရဲ့ LP ဓာတ်ပြားကို နားထောင်ခဲ့ရဖူးတာကို ကောင်းကောင်း မှတ်မိနေပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က ကလေးတို့ရဲ့ ဓာတ်ရှင်ရုံ
ဓာတ်ပြားအကြောင်းပြီးတော့ ၈ မီလီမီတာ ဓာတ်ရှင်ပြစက်လေးနဲ့ ရှေးဖြစ်ဟောင်း အောက်မေ့ဖွယ်လေးတွေ ပြောပါရစေဦး။
အဲဒါလည်း ငယ်ဘ၀အကြောင်း ရေးစဉ်က ကျန်သွားခဲ့တာပါ။
ရန်ကုန်မြို့လယ်ကို ပြောင်းလာတော့ ၁၉၆၉ ခုနှစ် ဇွန်လမှာပါ။ လမ်း ၄၀၊ အိမ်အမှတ် ၂၃၉၊ ပထမထပ်၊ ညာဘက်အခန်းမှာ နေခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြီးပါပြီ။
အဲဒီ့နောက် မကြာခင်မှာပဲ ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ တွင်ကျယ်နေတာတစ်ခုကို ရင်ဆိုင် တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ရွေ့လျား ဓာတ်ရှင်ရုံလို့ ခေါ်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ ဘာတွေကတော့ ရှာလို့ ရနိုင်တော့မယ် မထင်ဘူးဗျ။
ရေးရင်းနဲ့ ရှာကြည့်လိုက်တော့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း အဲသလို နယ်လှည့်ရုပ်ရှင်ရုံတွေ ရှိခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ကားတွေနဲ့ပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ ကလေးတုန်းက ကြုံခဲ့ရတာကတော့ ဘီးတပ် လှည်းကြီးခင်ဗျ။ အလုံပိတ်လှည်းကြီးပါ။ ပေါင်မုန့် ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။ အရွယ်အစားက အခုခေတ် Toyota Ipsum တို့ Wish တို့လောက် ရှိပါလိမ့်မယ်။ သစ်သားနဲ့ သွပ်ပြားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အလုံပိတ်လှည်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့လှည်းကြီးကို တစ်လမ်းဝင် တစ်လမ်းထွက် တွန်းသွားတယ်။ ပြီးတော့ တစ်နေရာရာမှာ ရပ်ထားတယ်။ ဟိုခေတ်က ရန်ကုန်မှာ အခုလို ကားတွေ မပေါသေးတော့ကာ ဘယ်လမ်းမှာဖြစ်ဖြစ် လမ်းဘေးမှာ ကပ်ရပ်စရာ နေရာက ခပ်ပေါပေါရယ်။
အဲဒီ့လှည်းကြီးက မူလက အဖြူရောင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေမယ့် ကျွန်တော် မြင်ဖူးတဲ့အချိန်မှာတော့ တော်တော် ညစ်ထေးနေတဲ့ အဖြူရောင်ပါ။
လှည်းမှာ အပေါက်နှစ်ပေါက်ပါတယ်။ လှည်းရဲ့ နောက်ပိုင်း ခေါ်မလား မသိဘူး၊ အဲဒီ့အပိုင်းမှာ ဘေးပေါက်တစ်ပေါက် ရှိတယ်။ အဲဒီ့မှာ ပြစက်ဆရာ၊ တစ်နည်းပြောရင် လှည်းကို တွန်းပြီး သည်အလုပ်နဲ့ ငွေရှာသူက ထိုင်ပါတယ်။ ကလေးပရိသတ်က လှည်းရဲ့ ဦးပိုင်းထိပ်က တံခါးမကြီးက လှည်းထဲကို ၀င်ရပါတယ်။ အဲဒီ့ တံခါးမကြီးကို ပိတ်လိုက်ရင် ပိတ်ကားဖြစ်သွားပါပြီ။ အဖြူရောင်သုတ်ထားတဲ့ ပျဉ်ပြားပေါ့။
အထဲက ထိုင်ခုံတွေကတော့ မြန်မာတို့ ထုံးစံအတိုင်း လှည်းအိမ် ဘေးနံရံမှာ ကပ်ရိုက်ထားတဲ့ ခုံတန်းရှည်ပါ။ မြန်မာ့ မြင်းလှည်းလည်း ထို့အတူ ဖြစ်သလို၊ ကုန်တင်ကားကို ခရီးသည်တင်ကား ပုံစံ လုပ်လိုက်တဲ့အခါလည်း အဲသလို ဘေးတန်းတွေ ရိုက်ထည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ထိုင်ခုံဖြစ်လာစေတာမျိုးမို့ မြန်မာတို့ ထုံးစံလို့ ရေးလိုက်တာပါ။
ကျွန်တော်တို့က တစ်မတ်လား၊ ဆယ်ပြားလား မမှတ်မိတော့တဲ့ ရုံဝင်ခကို ပေးပြီး အဲဒီ့ထဲ ၀င်လိုက်ရပါတယ်။ လူပြည့်တဲ့အခါ တံခါးကြီးပိတ်ပြီ။ တစ်ရုံလုံးလည်း မှောင်ကျသွားပါပြီ။ အဲဒါဆို ပြပါပြီဗျာ။ တောင်စဉ်ရေမရ အဆက်အစပ်မရှိ အင်္ဂလိပ်ဇာတ်ကားတိုတွေ၊ ဟိုတစ်ပိုင်း သည်တစ်ပိုင်း။ ပြစက်သံ တဂျောက်ဂျောက် ကြားမှာ ပြစက်ဆရာကြီး ပါးစပ်က ထွင်ပြီးပြောတဲ့ ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ ဇာတ်လမ်းကို နားဆင်ရင်း ကြည့်ပေတော့ပေါ့။
စုစုပေါင်းမှ သုံးမိနစ်လောက်ပဲ ကြာမယ် ထင်တယ်။ ဒါတောင် ချွေးတလုံးလုံး။ အလုံပိတ်ထားတော့ လူစော်ကလည်း နံသေးတယ်။ ကစားရာက ထလာကြတဲ့ ကောင်တွေချည်းပဲဆိုတော့ အကုန်လုံးက နဂိုကမှ ချွေးသံအပြည့်နဲ့ဟာ။
ကျွန်တော် တစ်ခါဆို တစ်ခါပဲ အဲဒီ့ထဲ ၀င်ထိုင်ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ခါတည်းနဲ့ကို မှတ်သွားတာပဲ။ ချွေးနံ့ မခံနိုင်တာ၊ အိုက်စပ်တာက တစ်ကြောင်း၊ အဆက်အစပ်မရှိ၊ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ အရုပ် တုံတုံချိချိတွေကြည့်ဖူးဖို့ အတွက် ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရတာ တန်တယ် မထင်မိဘူး။ ဒါနဲ့ နောက် ဘယ်တော့မှ အဲဒါကို မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး။
ကြည့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်း ကျွန်တော်က ခြောက်တန်းတောင် ရောက်နေမှကိုး။ အပြာစာအုပ်တောင် ဖတ်ဖူးထားလေတဲ့ ကလေးကြီးအရွယ် ရောက်နေပြီဆိုတော့ ကျိုးကြောင်း ဆင်ခြင်မိနေတာ ဖြစ်ကောင်းပါတယ်။
အဲ… တစ်ခါသားမှာတော့ အဲဒီ့လို ရုံလေးထဲမှာ လူကြီးတွေ အပြာကားကြည့်လို့ဆိုပြီး သတင်းစာထဲ အမှုတစ်မှု ပါလာတယ်။ အဲဒါကတော့ ပြစက်ဆရာအတွက် ကလေးတွေကို လည်ပြီး ပြနေတာထက် ပိုတွက်ချေကိုက်မယ် ထင်တယ်။ ကြည့်တဲ့ လူကြီးတွေဆိုတာကလည်း သာမန် လက်လုပ်လက်စားတွေပဲလားတော့ မသိဘူး။ ဘယ့်နှယ်က ဘယ့်နှယ် ကြည့်ကြတယ်တော့ မသိဘူး။ အဲဒီ့ထဲ လူကြီးတွေ ၀င်ပြီဆိုတာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က သည်လူတွေ ဘာကြည့်လောက်တယ်ဆိုတာ သိကုန်တော့မှာလေ။
အဲဒီ့ ရုပ်ရှင်အကြောင်းရေးရင်းနဲ့ ကလေးဘ၀တုန်းက ကျွန်တော့်ကို အဖေ ၀ယ်ပေးခဲ့တဲ့ အဖိုးတန် ကစားစရာ အကြောင်းကို ပြောပြဖို့ သတိရလာပြန်တယ်။
အဲဒါကတော့ Viewmaster ဆိုတာပါ။ လောပိတမှာကတည်းက ကျွန်တော့်ဆီမှာ ရှိနေခဲ့တာမို့ တော်တော် ငယ်ငယ်ကတည်းက ၀ယ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်ထဲ မွှေကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ Viewmaster နဲ့ တစ်ထပ်တည်း၊ ဘူးကအစ တူတဲ့ ပုံတစ်ပုံတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ့ မည်းမည်းလေးမှာ မြင်နေရတဲ့ လေးထောင့်ကွက်လေးထဲက မျက်စိပေါက်အတွက် ၀ိုင်းဝိုင်းလေး လုပ်ထားတဲ့ မှန်ဘီလူးနေရာက ကြည့်ရတာပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်မှာတော့ လေးထောင့်ကွက်ကြီး နှစ်ကွက် ရှိပါတယ်။ အပြင်က အလင်းကို ယူနိုင်အောင် အဲဒီ့မှာကျတော့ မှန်ဘီလူး မဟုတ်ဘဲ ကော်ပြား ဖြူဖြူလေးတွေ တပ်ထားပါတယ်။
အပေါ်က V ခပ်ပြဲပြဲ ပုံစံနေရာမှာ ဖလင်ချပ်ထည့်ရတဲ့ အံကလေးပါပါတယ်။ နောက်တစ်ပုံမှာ ပြထားတာကတော့ အဲဒီ့ထဲ ထည့်တဲ့ ဖလင်ချပ်အ၀ိုင်းလေးပါ။ အဲဒီ့မှာ ရောင်စုံ ပေါ့ဇတစ်(ဖှ်) ဖလင် လက်သည်းခွံလောက်လေးတွေ ပါပါတယ်။ ပုံမှာ ကြည့်ရင် ဘယ်နဲ့ ညာက ပုံချင်းဟာ အတူတူပါ။ စုစုပေါင်း ၁၄ ကွက်ပါပြီး အရုပ် ခုနစ်ခု မြင်ရပါတယ်။ Viewmaster မှန်ဘီလူး သေတ္တာ မည်းမည်းလေးရဲ့ ညာဘက်မှာ (ပုံမှာတော့ မမြင်ရပါ) မောင်းတံ အဖြူလေး ပါပါတယ်။ အဲဒီ့ မောင်းကလေးကို ဖိချလိုက်ရင် အမည်းရောင် ပေါ်လာပါတယ်။ ပြန်လွှတ်လိုက်ရင် နောက်တစ်ကွက် ကူးသွားပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ထားသလဲတော့ မသိဘူး။ သုံးဘက်မြင် 3D လို့ ခေါ်တဲ့ ရုပ်လုံးကြွ မြင်ရတာပါ။ ရုပ်သေ ရောင်စုံ ဓာတ်ပုံတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆေးသားက တအားကောင်းတော့ တော်တော် ကြည့်လို့ ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော့် Viewmaster နဲ့အတူ ပါလာတာက အချပ်ကလေး လေးချပ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချပ်က Tom & Jerry, နောက်တစ်ချပ်က Gulliver’s Travel, နောက်တစ်ချပ်က ရှုခင်းပုံတွေဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ချပ်ကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ Tom & Jerry တို့၊ Gulliver’s Travel တို့က ဇာတ်ဝင်ခန်း ဓာတ်ပုံတွေပါ။ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လုံးတော့ ဘယ်ဆန့်မလဲဗျာ။ စုစုပေါင်းမှ အပြားလေးတစ်ချပ်မှာ ခုနစ်ကွက်စာလေးပဲ မြင်ရတာကို။ သို့သော် ပါလာတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက စိုပြီး ရုပ်လုံးက ကြွနေတာမို့ ကြည့်လို့ တော်တော် ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဗျာ… အဲဒီ့ လေးချပ်ကိုပဲ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ထိုင်ကြည့်နေလို့ကတော့ ပျင်းလာတာပေါ့။ လောပိတမှာ နေလို့ ၀ယ်လို့ မရတော့လို့ပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပြည်သူပိုင် သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် ပစ္စည်းတွေ မရှိတော့လို့ပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း မတတ်နိုင်လို့ပဲလားတော့ မသိဘူး။ အဲဒီ့ Viewmaster အတွက် နောက်ထပ် ဓာတ်ပုံချပ်လေးတွေ ထပ်မရတော့ပါဘူး။
အဖေ ဘယ်လောက် ဈေးကြီး ပေးဝယ်လာရသလဲတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော့်မှာတော့ အဲဒီ့ လေးချပ်နဲ့ပဲ စခန်းသွားခဲ့ရတာမို့ နောက်ပိုင်းကျတော့ အဲဒါလေးနဲ့ ဆော့တောင် မဆော့ဖြစ်ပါဘူး။ သို့ပေတည့် ရန်ကုန် ပြောင်းလာတဲ့အထိ၊ ကျွန်တော် အသက် တော်တော်ကြီးတဲ့အထိ အဲဒါလေးကို အိမ်မှာ တွေ့တွေ့ နေခဲ့မိပါသေးတယ်။
အဲဒါနဲ့အတူ လောပိတတုန်းက မှတ်မိနေတာ တစ်ခုက အဲဒီ့ ကလေးဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး လောပိတမှာ နေစဉ် တစ်ခါသာ စားဖူးခဲ့တဲ့ ချောကလက်ပါ။ အဲဒါက လွိုင်ကော်မှာ အဖေတို့နဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ ပါသွားရင်း အမေကလား၊ အဖေကလား မသိ၊ ၀ယ်ကျွေးတာပါ။ လက်မလောက် အတောင့်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်ကလေး နှစ်ဖက်မှာ ချောကလက်ပြားနဲ့ အရွယ်တူ ထင်းရှူးပြားအ၀ိုင်းလေးနဲ့ပိတ်ပြီး လိပ်ထားတဲ့ စက္ကူတောင့်လေး။ အဲဒါ ကျွန်တော့် ကလေးဘ၀ လောပိတမှာ တစ်ကြိမ်သာ စားဖူးတဲ့ ချောကလက်ပါ။
နောက် အဖေ ထီပေါက်လို့ ဆုငွေသွားထုတ်တော့ အဖေ သွားလည်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးနဲ့ ကထိကကြီးအိမ်မှာ ဗိုလ်မှူးကြီးက ထုတ်ကျွေးခဲ့တဲ့ ခက်(ဒ်)ဘာရီ ချောကလက်က ဒုတိယအကြိမ်ပါ။ အဲဒါပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ကျတဲ့အထိ ချောကလက်နဲ့ ရေစက်မဆုံတော့ပါဘူး။ ပါးရှားတဲ့ ခေတ်ပေပဲကိုး။
အဲဒီ့အရင် မန္တလေးကလေးဘ၀တုန်းကတော့ အဘိုးက ၀ယ်ဝယ်ကျွေးလို့ သုံး-လေးကြိမ် စားဖူးတယ်လို့ မှတ်ပါတယ်။
မန္တလေးကလေးဘ၀မှာ မှတ်မိနေသေးတဲ့ စားစရာတွေ ကျန်သေးတယ် ခင်ဗျ။ ပထမဆုံးကတော့ ဒိန်ခဲ (Cheese) ငါးပိချက်ပါ။ အမှန်ကတော့ ငါးပိမပါပါဘူး။ ငါးပိချက်လို ချက်ထားတာမို့သာ ငါးပိချက်လို့ အနွတ္ထ သညာပြုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ့ ပြည်သူပိုင် မသိမ်းခင်၊ နေ၀င်းအစိုးရ မတက်ခင်လေးလောက်က အစစ အရာရာက ပေါပုံရပါတယ်။ အဲတော့ ဒိန်ခဲတွေလည်း ပေါပေသပေါ့ဗျာ။ မြန်မာတို့အတွက်ကတော့ Kraft Cheese က အလျှံပယ်ပေါ့။ အပြာရောင် သံဘူးအ၀ိုင်းနဲ့ လာတဲ့ Kraft Cheese အမာက အတော်ပေါသလို ဖန်ပုလင်းနဲ့ လာတဲ့ ပေါင်မုံ့သုတ် ဒိန်ခဲ (spread cheese) လည်း ကလေးဘ၀က အတော်များများ မြင်ဖူးပါတယ်။
အဲဒီ့ထဲက ဘယ်ဒိန်ခဲကိုလည်းတော့ မသိဘူးဗျ၊ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ချက်တာ၊ လွှတ် စားကောင်းပဲဗျို့။ အဲဒါ မစားရတာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ တောင် ကောင်းကောင်းကျော်သွားပြီ။ အိမ်မှာ ချက်စားကြည့်ရပေဦးမယ်။
မြောက်ပိုင်းမှာ တိုဖူးချဉ်လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ဆီတိုဖူးကိုလည်း ခရမ်းချဉ်သီးနိုင်းချင်းနဲ့ ချက်စားရင် အလွန်ကောင်းတာကို စားဖူးသူတွေ သိကြမှာပါ။ အလားတူပဲ၊ အညာက နွားနို့ခဲချက်ဆိုတာလည်း အသားဟင်းတောင် မလိုစေတော့တဲ့အထိ ထမင်း မြိန်စေပါတယ်။ အဲဒီ့နေရာတွေမှာ ချိ(စ်) ဒိန်ခဲနဲ့ ဖက်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ တကယ် ကောင်းမှာ သေချာတယ်ဗျ။
အရသာရှိသော စာကိုတော့ ရေးမိသွားပြန်ပြီ။ ကိုယ်တိုင် ချက်စားကြည့်ကြပြီး အကျိုးအကြောင်းလေးလည်း ပြန်ပြောကြဦးနော… 😀
Lutha Kyaw ငယ်ငယ်တုန်းက ဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ဆီမှာ ကြည့်ဖူးတယ်။ ကျနော်တို့က 3D လို့ခေါ်တယ်။ စနိုးဝှိူက် ကြည့်ဖူးတာ မှတ်မိတယ်။ အဲသည် အလုံပိတ်ရုံလည်းကြည့်ဖူးတယ်။ တခါတည်းနဲ့ လက်လန်တယ်။
Win Maung ဖတ်ရသေးဘူး… ကြိုပြီးlike ထားတာပါ
Aung Thein Kyaw အားပေးဂျက်က ကြမ်းလွန်းပါတယ် အဘရယ် 🙂
Alex Moe View master လို မျိုးလည်းငယ်ငယ်ကကြည့်ဖူးတယ်. ဓာတ်ပြားဖွင့်စက်တွေမရှိတော့ပေမဲ့ အဘိုးအိမ်မှာ ဓာတ်ပြားကြီးတွေ တွေ့ ဖူးတယ်. အခုတော့ဘယ်ပျောက်ကုန်ပြီမသိတော့ပါဘူး
Nge Thar View master တော့ အိမ်မှာရှိတယ် ခွေလဲ တော်တော်များတယ် တော်တော်ကြီးတဲ့အထိ ကြည့်ရတယ် ရေဒီယိုဂရမ်တော့ ရှိဘူးဗျ ရိုးရိုးရေဒီယို အကြီးကြီးတော့ ဗီဒိုနဲ့ထည့် ထားတာရှိတယ်
Kyaw Thura Htunအလုံပိတ်တွန်းလှည်းကြီးလားမသိ ဝင်ကြည့်ဖူးပါတယ်ခင်ဗျ။ ကလေးတွေမို့ ပြတဲ့လူကြီးကလည်း ပြီးပြီးရော ဘာတွေပြမှန်းမသိ မြင်းတွေပြေးနေတာ ပြလိုက်၊ ကျားကြီးတွေ ခြင်္သေ့ကြီးတွေပြလိုက်နဲ့ အကုန်ဝါးတားတားချည်းပဲခင်ဗျ။ မှောင်ရတဲ့အထဲ လူများရင် လှည်းကြီးက ဒယိမ်းဒယိုင်နဲ့။ မန္တလေး အနောက်ပြင်ဖက်မှာပါ။ တစ်ခါဆိုမှ တစ်ခါတည်းပါ။
Kyi Kyi Khin Viewmaster အချပ်တွေ အများကြီး ကြည့်ဖူးတယ်။ ငယ်ငယ်က မောင်နှမဝမ်းကွဲတွေ များတော့ ဘယ်အိမ်က ဝယ်တယ်တော့ မသိဘူး။ မေ့တောင်နေတာ ခု ဖတ်ရမှ သတိပြန်ရတယ်။
Baby Shwe Piguet ပြောလိုက်မှစားချင်လာပြီ၊ ဒီမှာရှိတဲ့ နံနံစော်စော် Cheese ကိုခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ချက်စားကြည့်ဦးမှ၊ ဒီလူကြီးစာတွေဖတ်ပြီး လူလည်း ဝစရာအကြောင်းတွေ ကြံဖန်ရှာနေမိပြန်ပြီ။
Author lettwebawPosted on 26 May 2015 13 March 2018 Categories Memoirs
Previous Previous post: အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၈
Next Next post: အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၁၀